ပနျးအိပျမကျ – My Blog
ပနျးအိပျမကျ ( စ / ဆုံး )
ကြှနျတေျာ့နာမညျ အာကာပါ… အငျးစိနျမှာ နတေယျအငျဂငျြနီယာနဲ့ ဘှဲ့ရပမေယျ့ အလုပျကတော့ကားပှဲစားဆိုတော့ဝငျငှလေဲ အသငျ့အတငျ့ပေါ့… လှနျခဲ့တဲ့ ၁ နှဈလောကျမှ အိမျထောငျကတြာမှနျပွညျနယျဘကျကနေ ရနျကုနျမှာစါရငျးကိုငျလာလုပျနတေဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ပေါ့ကြှနျတေျာ့မိနျးမကအသကျ ၁၀ နှဈငယျတယျအခုမှအသကျ၂၃ နှဈ… မှနျနဲ့ရှမျးစပျထားတာအသား က ဖွူဝငျးပွီးကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကလဲ မွငျသူငေးဘဲ…အပွငျတဈယောကျထဲသှားရငျအပြိုထငျပွီးလိုကျငနျးတဲ့သူမြားလို့သူ့ အလုပျအသှားအပွနျကို ဖယျရီလုပျပေးနရေတယျအရမျးလှလှနျးလို့ကြှနျတော့တို့ရညျးစားစဖွဈပွီးနယျကြှံ့ခါစကအငနျးမရ၅ခါ တောငျဆှဲလိုကျတာနမေကောငျးဖွဈပွီး ဆေးခနျးပါပွလိုကျရတယျ။
အခုတော့လဲ ၁ နှဈကြျောလာပွီဆိုတော့ တဈခါတဈလေ သူကတောငျ ကြှနျတေျာ့ကို ဦးဆောငျခငျြနပွေီ… ကြှနျတော့ အသငျအပွ ကောငျးတာလဲ ပါတာပေါ့… နတေိုငျးလုပျနတေော့ အရငျလို ၃-၄ ခြီမလုပျနိုငျပမေယျ့ တဈရကျကို တဈခြီကောငျးကောငျးတော့ လုပျ ဖွဈတယျ… ကြှနျတေျာ့အတှကျ ၁ ခြီဆိုပမေယျ့ သူ့ကို တော့ အနဲဆုံး ၂ ခါလောကျပွီးအောငျ လုပျပေးလိုကျတယျ… မိနျးခလေးဆို တာလဲ အထငျသေးခံရမှာ ဆိုးလို့တာ ဟနျဆောငျနရေတာ… သူလဲ သှေးသားနဲ့ လူဆိုတော့ ကာမဆန်ဒဆိုတော့ရှိတာကိုး။
သူတို့က တဈခါတဈခါပွီးသှားရငျ ကြှနျတျောတို့လို အားကုနျသှားတဲ့ သူမြိုးတှမေဟုတျတော့ ပိုတောငျ လိုအပျခကျြမြားသေး တယျ… အနဲဆုံး ၂ ခါလောကျမှ မပွိးလိုကျရရငျ သိပျမကွနေပျခငျြဘူးသုံးလေးရကျလောကျသာ. မလိုးဘဲ ထားကွညျ့လိုကျ မကွမေ နပျဖွဈပွီး ကြှနျတေျာ့ကိုတဈမြိုးမဟုတျတမြိုး ပွသနာရှာပွီး စိတျကောကျနတေော့တာ… အားရပါးရလိုးပေးလိုကျမှဘဲ စိတျကောကျပွသှေားတာ… အရိုးကှဲ မှ အသဲစှဲတယျဆိုတာတောငျရှိတယျမဟုတျလား… အရိုးကှဲအောငျလိုးပေးလိုကျကွညျ့ နောကျ ဆိုကိုဘာလုပျလုပျအပွဈမမွငျတော့ဘူးဒါတော့အိမျထောငျသညျယောကျကငြ်္ားတိုငျးသိပါတယျထားလိုကျပါတော့ လိုရငျးမရောကျဘဲ နတေော့မယျအိပျထောငျသကျ ၁ နှဈလောကျမှာ မိနျးမရဲ့ မိဘနှဈပါးလုံး ကားအကျစီးဒငျ့ဖွဈပွီး ဆုံးသှားလို့ တဈယောကျထဲကနျြတော့တဲ့ နယျက သူ့ညီမအငယျကို စောငျ့ရှောကျထားဘို့ဖွဈလာတယျ။
ကောငျမလေးနာမညျက သရဖီအခုမှ ကိုးတနျးကြောငျးသူအသကျကတော့ ၁၅ နှဈစှနျးစှနျး… လှခကျြကတော့ ကြှနျတော့မိနျးမအရှုံးပေးရတယျ… ဒီအရှယျဆိုတာ ဘဝသကျတနျးတလြှောကျအလှဆုံးအရှယျမို့လဲ ပါတာတော့လေ… ကြှနျတျောကလဲ မောငျနှမမ၇ှိတဲ့တဈဦးတညျးသောသားဆိုတော့အခုလိုသရဖီ ကြှနျတော့အတှကျ ညီမလေးတဈယောကျထပျရသလိုပါဘဲ… နယျကြောငျးကနပွေောငျးလာတာဆိုတော့စာသိပျမလိုကျနိုငျလို့ အားတဲ့အခြိနျတှမှောဂိုကျလုပျပေးရသေးတယျဆိုးတာတဈခုက သူရောကျလာလို့ ညဘကျတှဆေို ကြှနျတျောတို့လငျမယားနှဈယောကျ အရငျလို အားရပါးရ သိပျကဲလို့ မရတော့ဘူး… ကြှနျတျောတို့ လငျမယားက လိုးပွီဆိုရငျအားရပါးရ အျောပွီးလိုးလိုကျရမှ ကနြေပျတာ… အခုတော့ အိမျမှာ သရဖီရောကျလာလို့ သူကွားမှာဆိုးပွီး ထိနျးလုပျနရေတာ သိပျအဆငျမပွဘေူး။
ထိနျးပွီး လိုးတယျဆိုပမေယျ့လဲ တဈပါတျလောကျပါဘဲ…ဝါသနာကို မလှနျဆနျနိုငျလို့ လိုးရငျးအရမျးကောငျးလာရငျအရငျလိုအသံတှေ ပွနျကယျြလာတော့တာပါဘဲ… ( သရဖီ ) ကမြနာမညျသရဖီပါမိဘတှမေရှိတော့လို့တဈဦးတညျးတော့ အမဆီမှီခိုဘို့ရနျကုနျ ရောကျလာတာပေါ့ရနျကုနျမှာကထုံးစံအတိုငျးနယျလိုအိမျကွီးကွီးနဲ့ နဘေို့မလှယျတော့အမတို့လဲတိုကျခနျးမှာဘဲနကွေတယျကမြ အတှကျသုံးထပျသားနဲ့ အခနျးလေး ကနျ့ပေးထားလို့ နရေတာအဆငျပွပေါတယျ… အခနျးကနျ့ပေးထားပမေယျ့ လဝေငျလထှေကျ ကောငျးအောငျ အပျေါပိုငျးမှာတော့ ကွကျတူရှေးတနျးလေးတှေ ရိုကျထားပေးတယျ။
ရနျကုနျရောကျခါစ အဆငျမပွတောက ကြောငျးစာဘဲ. စာသငျပုံက နယျနဲ့ သိပျမတူတော့ အစပိုငျးတော့ တျောတျော အခကျအခဲဖွဈ တယျဒါပမေယျ့ မမယောကငြ်္ား ပွပေးလို့ နောကျပိုငျးမှာ တေျာ့တျောအဆငျပွပေါတယျစါပွပေးတဲ့အပွငျ ကမြကိုလဲ ညီမလေး တဈယောကျလို ခဈြလို့ သူ့ကို ကိုကွီးလို့ဘဲချေါတယျ… ကိုယျ့အမရဲ့ ယောကငြ်္ားဆိုတော့လဲ အကိုဘဲပေါ့…ဒါပမေယျ့ တဈအိပျထဲ နပွေီး အိပျခနျးခငျြးကပျယကျဆိုတော့ တရေးနိုး ညဘကျမှာ အသံတှေ ကွားနရေတယျ… အသံတှကေလဲ အစပိုငျးမှာ တိုးပမေယျ့ နောကျတော့ မထိနျးနိုငျလို့ထငျတယျ တျောတျောကယျြတာဘဲ…မမတို့ အခနျးက အသံတှေ ကွားရပွီဆို ကမြ အာခေါငျတှခွေောကျ လာပွီး တံတှေးတှေ အခနခန မြိုခနြရေတယျ… အဲဒီအသံတှေ ကွားရမှာ ရှကျလို့ နားပိတျထားရငျတော့ နားထဲမှာ ပဲ့တငျသံတှေ ထှကျနသေလိုဘဲ။
အ.အ.အအား.အားး…အား…ရှီးးးးကိုရယျ…အားး…အား.အားးကိုကို… အားဆိုတဲ့ မမရဲ့ အံကွိတျပွိး အျောတဲ့ အသံတှတေော့ဗှတျ ဖှတျဖှတျဖှတျနဲ့မညျနတေဲ့ အသံတှရေော…ကောငျးလိုကျတာအသဲရယျအသဲကော ကောငျးလားအားကောငျးတယျကို.လိုး.လိုး… အားရှီးးးးးအားအကို ပွီးတော့မယျအား…ကိုကိုကို.. အားးးးးးးးးးးး ပွီပွီကို.. အားးး.အားးးးဆိုတဲ့ အသံတှရေော စုံနတောဘဲ.. ကြ မအိပျပွီထငျပွီး ထငျတိုငျးကွဲနကွေတာလေ…. အသံတှေ ကွားရပွီဆို ကမြတကိုယျလုံး ထူပူလာပွီး ရငျတှေ အရမျးခုနျတာဘဲ… ကိုကွီးက မမ ပိပိလေးကို လိုးနတောဘဲ လို့ သိလိုကျပွီး ကို့ပိပိလေးကိုယျ ပွနျကိုငျကွညျ့မိတာ ကမြပိပိလေးက အရငျထကျ အရမျး ကို ဖေါငျးပွီးတငျးနတောဘဲ…နယျမှာတုနျးက ဖားပွုတျတှကေို သှားစရငျ စိတျတိုလာလို့ ဖေါငျးလာသလားထငျရတယျ… အဝမှလဲ အရညျတှရှေဲနတောဆိုတာ လေ။
မမတို့အခနျးထဲက အသံတှနေားထောငျရငျး ကိုယျ့ပိပိလေးကို ပွနျကိုငျထားရတာလဲ တကယျ့ အရသာပါဘဲရှငျ… ပိပိထိပျက ထောငျတကျနတေဲ့ အစလေ့ေးကို ပှတျမိတဲ့ အခါဆို တဈကိုယျလုံးကိုကငျြတကျသှားတာဘဲအသံနားထောငျပွီးလိုကျပှတျနတေဲ့ကြ မတောငျဒီလောကျအရသာရှိနတောတကယျလုပျနတေဲ့မမဆိုဘယျလောကျတောငျကောငျးလိုကျမလဲမသိဘူး၎-၅ရကျလောကျည တိုငျးအသံတှကွေားရတော့ ခြောငျးကွညျ့ခငျြစိတျပေါကျလာတယျအသံတှေ နားထောငျရုံနဲ့ အားမရနိုငျတော့ဘူး…. အဲဒါနဲ့ မမတို့ အခနျးနဲ့ကပျရပျ နံရံနားကို အသာတိုး. စာကကျြရငျ ထိုငျတဲ့ ထိုငျခုံလေးကို အသံမထှကျအောငျ အသာရှရေ့ငျး.. ဖွေးဖွေးခငျြးခုံပျေါ တကျပွီး မမတို့အခနျးကို ကွကျတူရှေးတနျးတှကွေားကနခြေောငျးကွညျ့လိုကျတော့။
အမလေး.ကိုကွီးလမေမရဲ့ပိပိလေးကိုအားရပါးရယကျနပေါ့လားမမလဲအရမျးကောငျးပုံရတယျသူ့ရဲ့ ပိပိရဲရဲလေးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ဖွဲပွီးအားရပါးရဇိမျယူနလေိုကျတာမြား.မနာလိုစရာကောငျးလိုကျတာ…နှဈယောကျလုံးအဝတျအစားဆိုတာလဲ လုံးဝမရှိတော့ ဘူး.. အယှကျခံရတော့ အရမျးကောငျးလို့ထငျတယျ… ပါးစပျဟ အသကျရှုရငျး မကျြနှာ တဈခုလုံး ရှုံမယျ့ပွီး တအငျးအငျးနဲ့ကို ငွီး လို့… မမရဲ့ နို့လုံးလုံးလေးနှဈလုံးကလဲ ခန်ဒာကိုရဲ့ လှုပျရှားမှုနဲ့ စညျးခကျြလိုကျရငျး တတုနျတုနျနဲ့ လှုပျရှားနလေိုကျတာ…ပေါငျတံ ဖှေးဖှေးနှဈလုံးကတော့ကိုကွီးလှတျလှတျလပျလပျယှကျလိုကျရအောငျလိုကျလြောထားတာထငျတယျ. ဘေးနှဈဖကျကိုအစှမျးကုနျ ဖွဲကားပွီးတော့သူ့ပိပိလေးကိုဖွဲထားလိုကျတာမြားရှငျကမြလဲကိုကွီးတို့အတှဲကို ကွညျ့ရငျးစိတျထဲမှာအားမလိုအားမရ ဖွဈလာလို့ ညဝတျဂါဝနျလေး မပွီး ဖောငျးကားနတေဲ့ ကိုယျ့ပိပိလေးကို ပွနျကိုငျရငျး အစလေ့ေးကိုပှတျနမေိတယျ… စိတျထဲမှာတော့ ကိုကွီး ယှကျနတေယျလို့ သဘောထားရငျးပေါ့… ကောငျးလိုကျတာရှငျ။
နောကျတော့ ကိုကွီးက မမဘေးမှာ. လှဲအိပျလိုကျတာ. အမလေး ပထမဆုံးစမွငျဘူးတဲ့ အရှယျရောကျပွီးသား ယောကငြ်္ားတဈ ယောကျရဲ့ လီးဆိုတာကွီးက အကွီးကွီးပါလား… ခုနှဈလကျမလောကျရှိမယျ… ဒုံးပွနျကွီးအလား. အပျေါကိုထောငျပွီး တရမျးရမျး နဲ့… ထိပျကွီးက လဒဈဆိုတာကွီးတယျထငျတယျ. နီညှိရောငျသနျးပွီး အရတှေလေကျလို့လေ…မမကလေ.. ကိုကွီးရဲ့လီးကွီးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ လှနျးဆုပျကိုငျလိုကျတာ… ပွီးမှ အားရပါးရ အပျေါအောကျပှတျပွေးနတော.. ကိုကွီးရဲ့ လဒဈကွီးက လကျနှဈဖကျ ကွားက ပျေါလာလိုကျ ပွနျပြောကျသှားလိုကျပေါ့…ပွီးမှ ခေါငျးငုံသှားပွီး မမရဲ့ နှုပျခမျးသားဖူးဖူးလေးတှနေဲ့ ငုံစုပျလိုကျတာကိုကွီး လဲအရမျးကောငျးသှားပုံရတယျ။
အား… ရှီးးးးဆိုပွီး ခါးကော့ပေးလို ကျတာခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ကမြလေ… ယောကျရမျးပွီး ကို့လကျညိုးကို စုပျနမေိတယျကိုကွီး ကောငျးလေ မမကပိုအားစိုကျပွီးစုပျလနေဲ့ ပါးနှဈဖကျကို ခှကျလို့… မမခေါငျးမော့လိုကျတယျဆိုလီးကွီး မမပါးစပျထဲက ထှကျလာ တဲ့အခါနှုပျခမျးရဲရဲလေးတှကေလီးကွီးနဲ့ကပျပွီးအပွငျကိုကပျပါလာတာကမိနျးခလေးခငျြးကွညျ့နတေဲ့ကမြတောငျစိတျလှုပျရှား တယျကိုကွီးလဲ အရမျးကောငျးနပေုံရတယျ.တအားအားနဲ့အရသာခံနရေုံတငျမဟုတျဘူး. မမရဲ့ ဆံပငျလေးတှကေို သပျတငျရငျး သူ့ လီးကွီး မမ ပါးစပျထဲ ဝငျထှကျနတောကိုပါ အားရပါးရ ကွညျ့ရငျး အရသာခံနတေယျ။
ခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ ကမြလဲ လကျညှိးတဈခြောငျးထဲ စုပျရတာ အားမ၇တော့လို့ လကျခလယျပါပေါငျးပွီး နှဈခြောငျးပူးစုပျနမေိ တယျ. ကိုကွီးလီးအမှတျနဲ့ပေါ့ …. မမတို့အခနျးထဲ ပွေးဝငျသှားပွီး ကိုကွီးလီးကွီးကို စုပျကွညျ့ခငျြလိုကျတာဆိုတာလေ….. ပွော သာပွောရသာပါ. တကယျဆိုကိုငျတောငျကိုငျရဲမှာ မဟုတျဘူး..အသဲယားစရာကွီးကို. ကွောတှကေလဲအပွိုငျးပွိုငျးထလို့ မာတောငျ့တောငျ့ကွီးနမှောဘဲနျော.မမက စုပျရငျးနဲ့ အားမရတော့ဘူးထငျတယျ…လိုးတော့မယျ ကို. ရာဆိုပွီး ကိုကွီးပျေါကို တကျခှ ပွီး ထောငျနတေဲ့ လီးကွီးကိုလကျနောကျပွနျကိုငျရငျးသူ့ပိပိလေးနဲ့ပှတျဆှဲနလေရေဲ့…ကမြလဲ မမလုပျတာကွညျ့ရငျး ကိုယျ့ပိပိလေး အဝကို လကျနဲ့ ပှတျနမေိတယျ။
နောကျတော့ မမက ကိုကွီးလီးကို ပိပိအခေါငျးဝတော့ပွီး ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခလြိုကျတာ….. ကိုကွီးရဲ့ လီးတုတျတုတျကွီးဆိုတာ လေ.. မမရဲ့ ပိပိလေးထဲတဖွညျးဖွညျးအထဲကို ထိုးခှဲဝငျရောကျသှားလိုကျတာမမရဲ့ပိပိလေးထဲကို ကိုကွီးလီးတဈဝကျလောကျဝငျ သှားတဲ့အခြိနျကမြပိပိလေးထဲကိုလဲလကျကအလိုလိုသှငျးမိရကျသားဖွဈသှားတာလကျနှဈဆဈလောကျဝငျသှားတယျအမလေးး လေးးး ကောငျးလိုကျတာ ရှငျ…လကျနဲ့တောငျ ဒီလောကျကောငျးနရေငျ.ကိုကွီးလီးကွီးနဲ့သာဆိုရငျတော့လားမမတို့ကို ကွညျ့နေ ရငျးနဲ့ကလိနတေဲ့ကမြလအေရမျးကောငျးလာပွိး ဒူတှေ မခိုငျခငျြတော့လို့မလဲသှားအောငျသဈသားတနျးတှကေို လကျတဈဖကျနဲ့ သဈသားတနျးတှကေို ကိုငျထားရတယျ…မမက လုပျနရေငျးနဲ့ အ၇ှိနျရလာလို့ ထငျတယျ ပျေါကနအေားရပါးရကို စေါငျ့ခနြလေိုကျ တာမြားအရမျးကောငျးနပေုံရတယျမကျြနာလေးရှုံမယျ့လို့ အပျေါမော့ရငျး ပါးစပျကနေ အသကျရှုရငျး အရသာခံနလေိုကျတာမြား တျောတျောကောငျးပုံရတယျကိုကွီးကလဲမမစေါငျ့ခကျြနဲ့အညီ အပျေါကို ကော့ကော့တငျပေးနတော.. ဆီစပျနှဈခု ရိုကျမိတဲ့ အသံ တှကေ တဈဖွောငျးဖွောငျးနဲ့။
သူတို့နှဈယောကျကို ကွညျ့ပွီးကမြလဲ အားကမြခံ ပိပိလေးထဲကို လကျနဲ့ ခပျသှတျသှတျလေး အသှငျးအထုတျလုပျနမေိတယျ… နောကျတော့.အားကိုအားး. အားးးးပွီးပွီးး အားအား.အားးးးးးးး ပွီးပွီဆိုပွီး မမတဈယောကျ ကိုကွီးပျေါ အရုပျကွိုးပွတျလဲကသြှား တာ… အောကျက ကိုကွီးလဲ အလိုကျသငျ့ဖမျးယူပွီးထှပေိုကျထားရငျး မမ နှဈဖူးလေးကို အနမျးရှညျကွီးပေးနတေယျကမြလဲ လေ… မမ ပွီးပွီဆိုပွီ အျောလိုကျတဲ့အခြိနျမှာဘဲ ပိပိလေးက အတငျးကိုပှစိပှစိနဲ့ ဖွဈလာပွီ အထဲကနေ အရညျတှေ ထှကျလာလိုကျ တာကမြလဲမမက ကိုကွီးပျေါမှောကျခလြိုကျတော့မှ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး လှမျးမွငျနရေတဲ့ မမပိပိလေးထဲ ကိုကွီးလီးစိုကျဝငျနတော ကို မကျြတောငျ မခကျဘဲ ကွညျ့နမေိတယျ… ကိုကွီးလီးက ဘယျလိုမ မနသေေးဘူးထငျတယျ. မာတောငျ့ပွီး… မမထဲက ထှကျ ထားတဲ့ အရညျတှနေဲ့ စိုရှဲလို့။
မမကို ထှေးပှထေ့ားရငျး တဈခကျြခကျြ အပျေါကို ကော့ကော့ထိုးပွီး ဆကျလုပျနသေေးတယျ… ကိုကွီးကော့တငျလိုကျတိုငျးလဲမမ ဆီက…အအ…အဆိုတဲ့ ညှီးသံလေးတှထှေကျနတေုနျးဘဲ… ကောငျးနသေေးပုံရတယျ…ခြောငျးကွညျ့နတေဲ့ ကမြလဲ လကျညိုးကို အဆုံးထိထညျ့ထားရငျး ကိုကွီးလီးကို မမပိပိလေးထဲ ကော့တငျလိုကျတိုငျး အခြိနျကိုကျ ကလိနမေိတယျ…တကယျအလိုးခံနတေဲ့ မမတော့မသိဘူး. ခြောငျးကွညျ့ရငျး ကလိနတေဲ့ ကမြတော့ အရမျးကောငျးလှနျးလို့ ပါးစပျဟပွီး အသကျရှုနရေတယျ…. လညျခြောငျးထဲမှာလဲ ဆို့တကျလာလို့ အသံမထှကျအောငျ မနဲ သတိထားနရေတယျ…ကမြလဲ ကိုကွီးလီးကို အငနျးမရကွညျ့နေ ရငျးနဲ့ သူ့မကျြနှာကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့….အမလေး… ကိုကွီးနဲ့ ကမြ မကျြလုံးခငျြးဆုံသှားတာ။
ကြှနျတျောလဲ မိနျးမအပျေါကတကျဆောငျ့ရငျးသူတဈခါပွီးသှားလို့ ပွိုလဲလာတဲ့ သူ့ခန်ဓာကိုပှဖေ့တျရငျး အနမျးပေးပွီး ခနားနားနမေိ တယျခနနားနတေုနျး တနှာစိတျနဲနဲလြှော့သလိုရှိတုနျး စိတျထဲ တဈယောကျယောကျခြောငျးကွညျ့နသေလိုခံစားရတာနဲ့ ကွညျ့မိ တော့… အဟာ… သရဖီလေး ကြှနျတျောတို့ လငျမယား လိုးတာကို ခြောငျးကွညျ့နတောဘဲ… ကြှနျတျောလဲ အရမျးလှတဲ့ အပြိုမ လေးတဈယောကျက င့ါလိုးတာကို ကွ့ညျနပေါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မာနျတကျပွီး မိနျးမ စေါကျဖုတျထဲ စိမျထားတဲ့ လီးက ငေါကျခနဲ ဖွဈသှားတာတခြီပွီးလို့မှိနျးနတေဲ့ မိနျးမတောငျ ကောငျးသှားပွီး အခနဲ အျောသှားတယျဒါနဲ့ ကြှနျတျောလဲ သရဖီ မကျြနှာလှလှလေး ကို အရသာခံကွညျ့ရငျး မိနျးမစေါကျဖုတျထဲကို တဈခကျြခငျြး ကော့တငျပွီး လိုးပေးနလေိုကျတာ…သရဖီလဲ. ကြှနျတျောလီး သူ့ အမ စေါကျဖုတျထဲ ဝငျတာကို စိုကျကွညျ့ရငျး သူ့ အဖုတျသူ နိုကျနပေုံရတယျ… ပါးစပျဟ အသကျရှုရငျးလို့… အသံမထှကျအောငျ မနဲ ထိနျးနရေတဲ့ပုံနဲဗြာ….သရဖီလေး ကြှနျတျောတို့ လိုးတာကွညျ့းရငျး အဖုတျနိုကျနရောက နှဈယောကျသားအကွညျ့ခငျြးဆုံသှား တယျ။
ကမြလဲ ကိုကွီးနဲ့ မကျြလုံးခငျြးဆုံတော့ လှနျ့ဖွနျ့ပွီး နောကျကို ဆုတျလိုကျမိတာ.. ဟနျခကျြပကျြပွီး ခုံပျေါက ပွုတျကပြါတော့ တယျ… “ဝုနျး” “အမလေး” လို့ လနျ့အျောမိတော့…ဖီဖီရေ.. ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတဲ့ မမရဲ့ စိုးရိမျတကွီးလှမျးမေးသံကွားလိုကျရတာ နဲ့.ဘာမှ မဖွဈဘူး မမ. စာအုပျပုံပွိုလို့ လနျ့သှားတာ.လို့ဖွလေိုကျတော့…အျော.. အေး.အိပျတော့ ဖီဖီ… ညနကျနပွေီ” ဆိုတာ နဲ့ ဟုတျကဲ့ မမလို့ ပွနျဖွလေိုကျတယျ…ပွီးတော့ မှ အတငျးကုနျးရုံးထပွိး ခုတငျပျေါကို လှဲအိပျလိုကျရတယျခုံပျေါက ပွုတျကသြှား တာဖငျထိုငျရကျ ပွုတျကလြို့ထငျတယျတငျပုဆုံနားတောငျ နာသှားတယျ.မမတို့တော့ ကမြဆီက ဘာမှမဖွဈဘူး အသံကွားလို့ထငျ တယျ…ဆကျလိုးနကွေလရေဲ့. ကမြ မအိပျသေးတာ သိလို့ထငျတယျ. စေါစေါကလောကျတော့ အသံမကယျြတော့ဘူး…ကမြလဲ ခြောငျးကွညျ့တာကို ကိုကွီးမိသှားလို့ အရမျးလနျ့ပွီး စိတျလှုပျရှားတာကော…မမတို့လိုးနတေဲ့ပုံတှမေကျြလုံထဲ ဖြောကျမရဖွဈနေ တာကောပေါငျးပွီး ကာမစိတျဖုံးလှမျးပွီး အရညျတှတေစိမျ့စိမျ့ထှကျနလေိုကျတာ.မိုးလငျးခါနီးမှဘဲ အိပျပြျောသှားတော့တယျ။
ညဖကျ စိတျလှုပျရှားပွီး အိပျမပြှျောဖွဈလိုကျလို့ နောကျနမေ့နကျအိပျယာထ နောကျကသြှားတာ.. နိုးလာတော့ မမတောငျ ကုမ်ပသီ သှားပွီကိုကွီးလဲ ကားပှဲစားတနျးဘကျထှကျသှားလို့ အိမျမှာ တဈယောကျထဲ ကနျြခဲ့တယျ…… ကမြက စနနေဆေို့တာ့ ကြောငျး တကျစရာ မလိုဘူးလေ…နိုးတာနဲ့ အရငျဆုံး အိမျသာသှားပွီး ပိပိကို ရအေရငျ ဆေးရတယျ… မနညေ့က အရတှေပေလပှနရောက ခွောကျနပွေီဆိုပမေယျ့ နရေတာ စိတျမသနျ့လို့…ရဆေေးပွီးတာနဲ့ မကျြနှာသဈ… ရပေါ တဈခါထဲ ခြိုးပွီး အိမျနရေငျး တဈယောကျ ထဲ ရှိတာဆိုတော့ ထဘီဝတျမနတေော့ဘဲ သဘတျလေးဘဲ ပတျပွီ ရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလိုကျတာ…အို… ကိုကွီး……ကားပှဲစား တနျးမသှားတော့ဘဲ ပွနျလှညျ့လာပုံရတဲ့ ကိုကွီးကို တှလေိုကျရလို့ ကွောကျလနျ့ပွီး အခနျးဘကျကို အပွေးလေးသှားလိုကျ တယျ..တဈကိုယျလုံးမှာ သဘကျတဈခုဘဲပတျထားတာဆိုတော့ ကိုကွီးရှမှေ့ာ ရှကျတာလဲပါတာပေါ.. ဟုတျတယျလေ. သဘကျဆို တာ ပိပိတှေ့ နို့တှကေို လုံအောငျဖုနျးထားပမေယျ့ ကမြရဲ့ ပေါငျတံ တဈဝကျကြျောလောကျထိ ပျေါနတောကိုး။
ကြှနျတျောလဲ ဒီနေ့ ကားပှဲစားတနျးဘကျ ထှကျလာပွီးခါမှ စိပျသိပျမပါတော့တာနဲ့ အိမျကို ခွလှေမျးပွနျလှညျ့ရငျး မနိုးသေးတဲ့ သရဖီအတှကျ မုနျ့ဟငျးခါးပါ ဝယျခဲ့လိုကျတယျ..အိမျပွနျရောကျတော့ သရဖီရခြေိုးနတေဲ့ အသံကွားတာနဲ့ ပါလာတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးကို အဆငျသငျ့ပွငျပေးထားလိုကျတယျ…၅ မိနဈလောကျနတေော့ သရဖီလေး ရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလာတဲ့ပုံက အရငျလို လုံလုံခွုံခွုံ မဟုတျဘဲ သဘကျတဈထညျဘဲဖွဈသလို ပတျထားတာ.. အောကျပိုငျးက သူ့ရဲ့ ပနျးနုရောငျသနျးနတေဲ့ အသားအ၇ညျနဲ့ ဖွောငျ့ဆငျး နတေဲ့ ပေါငျလုံးလုံးလေးတှကေို မွငျလိုကျရတော့ ကြှနျတော့ စိတျတှလှေုပျရှားလာလိုကျတာ…မမြှျောလငျ့ဘဲ ကြှနျတော့ကို ရုတျတရကျတှလေို့ကျရလို့ထငျတယျ… လနျ့ပွီး အပွေးတပိုငျးထှကျသှားတော့ ကဗြာဆနျဆနျတုနျခါသှားတဲ့ သူ့ရဲ့ အပြိုစငျ အိုးလေး နဲ့ နောကျပိုငျးအလှကို တဝကွိးငေးကွညျ့နလေိုကျမိတယျ။
နိုးလာပွီလား… ဖီဖီ… ဒီမှာ မနကျစာပွငျထားတယျ.စားလိုကျအုံးလို့လှမျးပွောတာကို ကိုကွီးကို မကျြနှာခငျြး မဆိုငျရဲ တာ နဲ့.ဟုတျကဲ့.တဈခှနျးထဲပွောပွီး အခနျးထဲ မွနျမွနျပွေးလာမိတာအခနျးဝမှာခလုတျတိုကျလဲတော့တာဘဲဝုနျးအမလေး…အိမျမှာ တဈ ယောကျထဲ ရှိတယျထငျပွီး ပွီးစလှယျ ပတျလာခဲ့တဲ့ သဘကျက လုံအောငျမဖုနျးနိုငျတော့ဘဲ…ဖရိုဖရဲ ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျကိုကွီး ရောကျလာလို့…အိုး…. ကိုကွီး မလာနဲ့လေ… သှားသှား…ဆိုပွီးအလှနျ့တကွား ပွောလိုကျမိတယျ..ကိုကွီးလဲ ကမြရှကျမှာဆိုးလို့ လား…မကောငျးတကျလို့လားမသိ… အခနျးအပွငျ ပွနျထှကျပေးတာနဲ့ သဘကျကို သသေခြောခြာပွနျပတျပွီး ကွိုးစားထကွညျ့ တာ. ညက ထိထားတာရယျ. အခု လဲတာရယျပေါငျးလိုကျလို့ ဘယျလိုမှ မထနိုငျတော့ပါဘူး…ဖီဖီ… ထလို့ရလား….အီးကြှတျကြှတျ ကမြလဲ ပွနျမဖွနေိုငျတော့ဘဲ ငွီးငွူနမေိတယျ။
ကမြဆီက ထူးသံမကွားတာနဲ့ ကိုကွီး အတငျးဝငျလာပွီ…ကဲ.. မထနိုငျဘူးမဟုတျလား.လာပါရှကျမနပေါနဲ့ကိုကွီးကတခွားလူမှ မဟုတျတာဆိုပွီး အတငျးဆှဲထူပွီး ခုတငျပျေါတငျပေးတယျကမြတကိုယျလုံးမှာသဘကျတဈခုထဲပတျထားတဲ့ အခြိနျဆိုတော့ကိုကွီး ဆှဲထူလိုကျတဲ့အခြိနျမှာဖယိုဖရဲဖွဈသှားလို့နို့အုံလုံးလုံးလေးနှဈလုံးပျေါသှားလို့ မနဲလကျနဲ့ကာလိုကျရတယျ…လကျနဲ့ကာလိုကျရတာ ဆိုတော့ နို့သီးခေါငျးလေးတှနေဲ့တဈဝတျလောကျဘဲကာလို့ရတာပေါ့အားလုံး.တော့ ဘယျလုံပါမလဲ…ကမြလဲ ရှကျရှကျနဲ့ ကိုကွီးကို ကွညျ့လို့တော့…. ကိုကွီးဆိုတာလေ… ကမြရဲ့ နို့လေးတှကေိုကွညျ့နလေိုကျတာ.ကိုကျစားတော့မယျ့အတိုငျးဘဲ…တံတှေးတှလေဲခန ခနမြိုခလြို့…သူကွညျ့နတောကိုကမြသိသှားတော့မှရုပျတညျနဲ့ ဖီဖီလေး.ဘယျနရောနာသှားလဲဆေးလိမျးပေးမယျရပါတယျဘာမှမ ဖွဈဘူး ခွသေလုံးနရောပါသမီး ကိုယျ့ဖာသာ ကိုယျ လိမျးလို့ရပါတယျ။
ရတယျ မလုပျနဲ့ အခုသှေးပူတုနျး ဆေးလိမျးထားမှ သကျသာမှာ. မဟုတျရငျ ဒဏျဖွဈသှားမယျ…ဆိုပွီး အခနျးထောငျ့မှာ အဆငျသငျ့ ရှိနတေဲ့ ဒဏျကွဆေေးယူလိမျးပေးတော့တယျ…ကမြမှာ. သဘကျက အစကထဲက ပေါငျလညျလောကျထိဘဲ လုံတာကို အခုလို ခုတငျပေါငျမှာ လှဲနပွေီး ဆေးလိမျးခံနေ၇တော့ ပေါငျရငျးထိပါ ပျေါခငျြသလိုဖွဈနတေယျ…ကိုကွီးကတော့ မသိသလို ဆေးလိမျး ပေးနလေရေဲ့…ဆေးလိမျးတာကလဲ နာနတေဲ့ ခွသေလုံနရောက နဲနဲ ကိုကွီးလကျတှကေ ဒူးနရောလောကျထိတကျတကျလာ တယျ… ပွီးတော့ ဖှဖှလေးဆုပျနယျပေးနတောကကမြစိတျတှကေို မရိုးမရှဖွဈစပေါတယျသူဆေးလိမျးဆုပျနယျပေးနတေဲ့ နရော တှကေမဆိုငျတဲ့ နရောတှဆေိုတာသိပမေယျ့လဲကမြကိုယျတိုငျက ငွငျးဆနျဘို့ အားမရှိဘူးဖွဈနတေယျ…ဆေးလိမျးပေးနရေငျးနဲ့ ခွထေောကျကိုနဲနဲဆှဲကားလိုကျတာ…ပတျထားတဲ့သဘကျက ကမြအောကျပိုငျးကိုလုံအောငျမဖုံးနိုငျတော့လို့ကမြပိပိလေး လတေိုး ခံလိုကျရပွီးအေးကနဲဖွဈသှားတယျအမလေးကိုကွီးကကမြပေါငျကွားကိုကွညျ့နတောဘဲ…ကမြလနျ့သှားပွီး ပေါငျကွားကိုလကျနဲ့ ကာလိုကျတော့မမွငျရပါဘူးဖီဖီလေးရယျမရှကျပါနဲ့တဲ့ ပွုံးဖွဲဖွဲနဲ့ ပွောနလေိုကျတာမုနျးစရာကောငျးလိုကျတာ။
ကမြလဲ သူ့ကို မကျြစောငျးတဈခကျြထိုးပွီး ကွညျ့မိကွညျ့ရာ ကိုကွီးပေါငျကွားကို မကျြလုံးရောကျသှားတော့…အငျကိုကွီးရဲ့ လီး ကွီးက ပုဆိုးကွား ထောငျနပေါ့လားကမြညက ခြောငျးကွညျ့ခဲ့ရတဲ့လီးကွီးမမကိုအရမျးကောငျးအောငျလိုးပေးတဲ့လီးကွီးပါလား ဆိုပွီး တှေးမိပွီးမကျြစိမလှဲဘဲကွညျ့နမေိတယျကမြရဲ့ အောကျပိုငျးကို ကွညျ့ပွီး ကိုကွီး စိတျတှထေနတောဘဲဆိုတာစဉျးစားမိ တော့ရှကျစိတျနဲ့ အတူ ကနြေပျကွညျနူးတဲ့ စိတျပါတပွိုငျထဲ ဖွဈလာမိတယျကွညျနူးစိတျနဲ့ တပွိုငျထဲလိုဘဲကမြရဲ့ပိပိလေးက ဖေါ ငျးပွီးတငျးလာတယျဆိုတာကိုယျ့ကိုကိုယျသိလိုကျတယျ…ကမြကွညျ့နတေုနျးက ကိုကွီးလီးကွီးက ငေါကျခနဲ ငေါကျခနဲ နှဈခါ လှု ပျသှားတာ … ကွညျ့နတေဲ့ ကမြလေ. ရောငျရမျးပွီး ပိပိလေးကို စဈခနဲ စဈခနဲ လိုကျညှဈနမေိတယျ။
ကမြလဲ ကိုယျ့အဖွဈကို မလုံမလဲဖွဈပွီး ကိုကွီးကို ကွညျ့လိုကျတော့ကိုကွီးလေ.. သူ့လီးကွီးကို မကျြစိမလှဲတမျးစိုကျနတေဲ့ကြ မကို ကွညျ့နတောပါလား… အား… သှားပါပွီ….ရှကျလိုကျတာလဘေယျလိုနလေဲဖီဖီလေးဘာကဘယျလိုနရေမှာလဲ.ဘာတှမေေး မှနျးလဲ မသိဘူး. ကိုကွီးနျောကိုကွီးက ဖီဖီ့ခွထေောကျ ဘယျလိုနလေဲ မေးတာပါ… ကောငျမလေးနျောအမလေ.ကမြ. ကိုယျ့အတှေး နဲ့ကို နောကျတဈကွိမျအရှကျရပွနျပွီ…နောကျတော့ကိုကွီးကကမြရဲ့ ခွသေလုံးအောကျပိုငျးကိုပှတျသတျနိုပျပေးနရောကလကျသှား ဆေးလိုကျအုံးမယျဖီဖီ့အသားတှေ ပူကုနျမှာစိုးလို့… ပွီးမှ ဒူးကိုနိုပျပေးမယျအာကိုကွီးကလဲဒူးကဘာမှမဖွဈပါဘူး… တျောပွီမနှိုပျနဲ့ တော့သိတဲ့ လူကွီးပွောရငျ နားထောငျစမျးပါ. ဖီဖီရယျ. ကိုကွီးကို ဆရာမလုပျစမျးပါနဲ့.. အခုပွနျလာခဲ့မယျဆိုပွီးအခနျးထဲက ထှကျ သှားတယျ…ကမြလဲ ပွနျပွောလို့ မရနိုငျမယျ့ အတူတူပိုပွီးလုံခွုံအောငျ အနားက ဆငျဆှယျရောငျ ကွိုးတဈခြောငျး အကြီင်ျလေးကို အမွနျကောကျစှတျလိုကျပွီး သဘကျကို အောကျထိတိုးပွီး ပတျလိုကျတော့ ပိုပွီးလုံလုံခွုံခွုံရှိသှားတာပေါ့။
ကိုကွီးလဲ ဘယျလောကျတောငျ အပွေးတပိုငျး ပွနျလာလဲ မသိဘူး…. ကမြ အတှငျးခံတှတေောငျ မဝတျရသေးဘူး. သဘကျပွငျ ပတျပွီးရုံဘဲရှိသေးတယျ. အခနျးထဲပွနျရောကျလာပွီး…ကမြကို ပွနျလှဲအိပျခိုငျးပွီး ဒူနှဈဖကျကို နှိုပျနယျပေးနလေရေဲ့….ကမြက.ကို ကွီး. သမီး အကငြ်္ှဝတျလိုကျအုံးမယျလေ…ဆိုတော့ မဝတျနဲ့ အခုကော ဘာပျေါနလေို့လဲ… တခွားလူတှတေော့ ကွညျ့ခငျြ တယျ… ကိုယျကတြော့ မပွခငျြဘူး… တရားလား…တဲ့..အာ. ဘာတှလောပွောနမှေနျးမိသဘူး….ဆိုပွီး ရှကျကို့ရှကျကနျးနဲ့ ပွနျပွော လိုကျတော့ ကိုကွီးလဲ ကမြဒူးတှကေို သဘကျအပျေါကနတေောငျမဟုတျတော့ဘူး… အသားကိုပါ တိုကျရိုကျထိပွီး ဆုပျနယျနေ လရေဲ့… နယျနတောမှ တဖွညျးဖွညျး ဒူးအထကျပိုငျးနားကိုပါနဲနဲတိုးလာနတောကမြလဲ ကိုကွီးနဲ့ မမလိုးနတောကို ညက ခြောငျးကွညျ့ထားတာကို လူမိခံထားရတဲ့ သူဆိုတော့ သူလုပျနသေမြှကို ဘာမှ မပွောသာဘူး ဖွဈနတေယျ… ကိုကွီးရဲ့ အပှတျအ သပျတှကေို သာယာမိတာလဲ ပါတာပေ့ါ။
ကိုကွီးပေါငျကွားလို လှမျးကွညျ့မိတော့လဲ… သူလီးကွီးဆိုတာလေ… ဒုံးပြံကွီးထောငျနသေလားထငျရတယျ… အကွာကွီးကွညျ့ မိရငျ ကိုကွီးမိမှာဆိုးတာနဲ့ မကျြလုံးမိတျလိုကျတာ.. မကျြလုံးထဲမှာ ကိုကွီးလီးကွီးဘဲ မွငျနတေော့တယျ….ဒါနဲ့ ကမြလဲ မကျြလုံးထဲ မှာ ကိုကွီးရဲ့ ပုဆိုးအောကျက ထောငျနတေဲ့ လီးကွီးကိုတလှညျ့… ညက မမ စုပျပေးနတေဲ့ ပုံတှေ… လိုးနကွေတဲ့ပုံတှေ ကို ပွနျမွငျ လာရငျး…. ကိုကွီးရဲ့ အပှတျအသပျတှကေို သာယာမှနျးမသိသာယာနမေိတော့တယျ……ကိုကွီးလဲ ကမြကို ပှတျသပျနတော. တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပေါငျလညျလောကျထိတောငျရောကျလာပွီ….တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အခွအေနမေကောငျးနိုငျတော့ဘူးဆိုတာ ကမြရိတျ မိပမေယျ့လဲ ပါးစပျက အာစေးထညျ့ထားသလို ဘာသံမှ မထှကျဘူး ဖွဈနတေယျ။
နောကျတော့ ကိုကွီးက ကမြလကျတဈဖကျကို ယူပွီး သူ့ပေါငျပျေါတငျလိုကျပွီး ကမြပေါငျတှကေိုဆကျနယျနပွေနျတာ ပေါငျရငျး နားထိတောငျနယျခြဲ့လာတာကိုကမြလဲကိုကွီးလုပျနသေမြှကိုငွိမျခံမိရငျးသာယာနမေိတယျကိုကွီးကကမြပေါငျကို ပှတျသပျနယျနေ ရငျးက တဖွညျးဖွညျးနရောရှယေူ့လာလိုကျတာ…ကမြလကျကလေးကို သူ့လီးကွီးနဲ့ မထိတထိဖွဈလာပါတော့တယျ…ကမြလေ.. ကိုကွီးလီးကို လကျနဲ့ ထိမိလိုကျတော့ရုတျတရကျဒါကွီးက မမစုပျပေးထားတဲ့…မမကို အရမျးကောငျးအောငျ လိုးပေးတဲ့ လီးကွီး ပါလား…ငါလဲ စုပျပေးခငျြလိုကျတာလို့ တှေးမိပွီး) လကျနဲ့ ဖမျးကိုငျလိုကျမိတယျ…ပူနှေးပွီး မာတောငျနတေဲ့ ကိုကွီးလီးကိုကိုငျမိပွီး တော့မှ…အိုကရြှကျပွီးလကျကို အမွနျရုတျလိုကျရတယျ…
ကိုကွီးလဲ စိတျအရမျးလှုပျရှားသှားလို့ထငျတယျ… ကမြနုပျခမျးကို ကုနျးပွီးစုပျယူလိုကျတာ…အသကျရှုရပျမတကျပါဘဲရှငျခံစား လိုကျရတဲ့ကမြမှာကမြရုံးပွီး သူ့ကို တှနျးထုတျပမေယျ့ သူ့ခန်ဓာကိုယျကွီးကို ရှအေ့ောငျ မတှနျးနိုငျဘူးဖွဈနတေယျ…. ကမြနုပျခမျးတ စုံလုံးလဲ ကိုကွီးပါးစပျထဲမှာ စုပျယူခံထားရတော့ စကားလဲပွောလို့မရဘဲ… တအှနျးအှနျးနဲ့ ဖွဈနတောပေါ့။ နမျးနရေငျးကနေ ကမြ ရဲ့ ဘရာမပါလို့ အလှယျတကူရှာတှသှေ့ားတဲ့ ဆငျဆှယျရောငျ ကွိုးတဈခြောငျး အကငြ်္ီ အောကျက နို့လုံးလုံးလေးကိုပါဖှဖှလေး ဆုပျနယျနလေိုကျတာ… ကမြတကိုယျလုံး အားအငျတှကေုနျဆုံးသှားသလို ဖွဈပွီး ရုံးဘို့ အားမရှိတော့ဘဲ ငွိမျကသြှားပါတော့ တယျ… မကွုံဘူးတဲ့ခံစားမှုတှကေို သာယာမိသှာတာလဲ ပါတာပေါ့…နောကျတော့ ကိုကွီးလြှာကွီးကမြပါးစပျထဲကို တိုးဝငျလာလို့ တားဘို့ အားမရှိတဲ့ အဆုံးပွနျစုပျယူရငျးလညျခြောငျးထဲကနေ တအငျးအငျးနဲ့ ငွီးသံတှေ ထှကျလာပါတော့တယျ…ကမြရဲ့ နို့လုံးလုံး လေးတှဆေိုတာလဲ ကိုကွီးရဲ့ ပှတျသပျမှုကွောငျ့ အရမျးကို တငျးလာပွီး နို့သီးခေါငျးလေးတှထေောငျနတော…. ကိုကွီးရဲ့ လကျဖဝါး နဲ့ပှတျသပျနလေို့နဲနဲတောငျ ကွိမျးနသေလိုနဲ့အရမျးခံလိုကောငျးတာဘဲ…ကမြလဲ ကိုကွီးလြှာကွီးကို တမြှငျးမြှငျးစုပျယူနရောက မောလာလို့ ခနလှတျပေးလိုကျတော့ သူ့နှုပျခမျးတှကေကမြပါးလေးကို ရှေ့သြှားပွီးအနမျးရှညျကွီးပေးပါတော့တယျပွီးမှ ကမြရဲ နားရှကျလေးဆီ ဖှဖှလေး ရှသှေ့ားပွီး. လြှာကလေးနဲ့ ကလိနတော ကမြ ဓါတျလိုကျတလို တှနျ့ကနဲ ဖွဈသှားတယျ.. ဒါပမေယျ့ မရုံး မိပါဘူး… ကိုကွီးလေ… ကမြနှလုံးသားတှကေို အရပြေျောအောငျလုပျနသေလိုဘဲ။
ပွီးတော့ ကမြရဲ့ အကငြ်္ီပါးလေးကို အပျေါလှနျခြှတျလိုကျတာ…ကို ခြှတျလို့လှယျအောငျ အလိုလို ကွှပေးလိုကျမိတယျ… ကမြ လကေိုကွီးလုပျသမြှကို သာယာပွီး လိုကျလြှောနမေိတော့တယျရှငျ..နောကျတော့ သူ့ပါးစပျကွီးနဲ့ ကမြရဲ့ နို့အုံတဈလုံးလုံးကို ငုံပွီးစို နလေိုကျတာ.ခံလိုကျကောငျးလောကျတာရှငျတဈလုံးကိုစို့နရေငျး နောကျတဈလုံကိုပှတျသပျစုပျနယျပေးနတော…နောကျတော့နို့ လေးနှဈလုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံးစို့နရောက အောကျကို တဖွေးဖွေးဆငျးရငျး ကမြရဲ့ ဗိုကျသားလေးတှေ…. နောကျ ခကျြကလေး ထိ လြှာနဲ့ ယှကျလိုကျ နှုပျခမျးနှဈခုနဲ့ စုပျယူလိုကျနဲ့ လုပျပေးနတော.. ခံစားရတဲ့ကမြထှနျ့ထှနျ့လူးနတေော့တာပါဘဲ…ပွီးတော့… တ စိတျတပိုငျးပွလြှေော့နတေဲ့ ကမြခါးကသဘကျကိုလှနျထုတျလိုကျပွီး ကမြရဲ့ဆီးခုံကိုနမျးလိုကျဆယျပငျလောကျ ကွို့တို့ကွဲတဲ ပေါကျနတေဲ့ အမှေးနုလေးတှကေို သှားတှနေဲ့ကိုကျလိုကျ လြှာနဲ့ ယှကျလိုကျနဲ့ ကမြကို အရမျးအသဲယားအောငျလုပျနပေါတော့ တယျရှငျ…။
နောကျတော့ ပေါငျလေးတှကေို ဖွဲပွီး လြှာနဲ့လိုကျယှကျလိုကျနမျးလိုကျနဲ့လုပျနတေယျ…. ပေါငျတှကေို နမျးနရောက ကမြရဲ့ ပိပိအ ပွငျနှုပျခမျးနားထိရောကျလာလိုကျ ပွနျဝေးသှားလိုကျနဲ့လခေံစားရတာပိပိလေးထဲမှာအရမျးရှလာလို့တခါတညျး ကမြစေါကျပတျ လေးကိုလြှကျပါတော့လို့ အျောလိုကျခငျြတော့တယျ…ကိုကွီးလေ… ပိပိလေးကိုလကျနဲဖွဲပွီးအထဲက အတှငျးသားရဲရဲလေးတှကေို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့နသေေးတယျကြှနျတျောလဲ သရဖီလေးကို အားမလိုအားမရဖွဈပွီး စိတျထလာအောငျစေါကျဖုတျအကှဲကွောငျးကို တမျးမယှကျလိုကျဘဲနဲ့ ဘေးဘကျတှပေေါငျတှငျးသားတှကေိုဘဲယှကျပေးလိုကျစုပျလိုကျလုပျနမေိတယျ…ပွီးမသရဖီရဲ့အပြိုစငျ စေါကျဖုတျလေးကိုလကျနှဈဘကျနဲ့ ဖွဲကွညျ့လုကျတာလှလိုကျတာဗြာ… အစလေ့ေးက ပွူးပွူးလေးနဲ့ စေါကျဖုတျအတှငျးသား လေးတှကေအနီရောကျမကပြနျးဆီရောငျသနျးပွီးအဖုတျပတျပတျလညျမှာလဲအမှေးလုံးဝမပေါကျသေးဘဲ ဆီခုံအောကျနားမှာဘဲ ကွို့တို့ကွဲ့တဲ့ အမှေးနုလေးတှနေဲ့အထဲကထှကျနတေဲ့ အရညျတှကွေောငျ့ထငျတယျ.. သရဖီ့စေါကျဖုတျအနံ့လေးက သငျးလို့ကြှနျ တေျာ့မိနျးမတောငျ သရဖီစေါကျဖုတျနံ့လောကျ ဆှဲဆောငျမှု မရှိဘူး… စေါကျဖုတျနှုတျခမျးသားဆိုတာကလဲ ပှငျ့ဖတျလေးတှကေို နုဖတျပွီး နှငျးဆီပနျးပှငျ့လေးတဈပှငျ့ကို ကွညျ့နရေသလိုဘဲ။
ကမြရဲ့ အရမျး စိတျပါပွီး အရတှေတေစိမျ့စိမျ့ထှကျနတေဲ့ ပိပိလေးကို ဖွဲပွီး အကွညျ့ခံရတာ… အရမျးကို သာယာမိသလိုဘဲလေ… မိနျးခလေးဆိုတော့ ကို့ကို အရမျးတကျမတျတယျဆို ကွနေပျကတြာ မဟုတျလား…ကိုကွီးလေ. ကမြပေါငျတှငျးသားတှေ… ဆီးစပျတှကေို စိပျကွိုကျယှကျပွီး ကမြ မခံမရပျနိုငျ အရမျးတှနျ့လိမျလာ တော့မှ ရုတျတရကျ… ပိပိအကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ အောကျကနေ အပျေါထိ လြှာပွားကွီးနဲ့ဖိပွီးယှကျတငျလိုကျတာအားး.ရှီးးးကိုကွီး…… လို့ အျောရငျးရုတျတရကျ ခေါငျးထောငျကွညျ့မိပွီးနောကျဆကျတှဲဟငျးးးးးးးးးးးးး ရှီးးးးလို့ ငွီးသံရှညျကွီးပေးပွီး ခေါငျးအုံးပျေါ ပွနျပွုတျကသြှားတော့တယျကောငျးလိုကျတာရှငျဘယျလိုကောငျးလို့ ကောငျးမှနျးမသိဘူးပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံလေ.နောကျတော့ပိပိလေးကို ဖွဲပွီးအတှငျးသားတှကေိုလြှကျလိုကျအစလေ့ေးကိုလြှာနဲ့ကလျောတငျလိုကျနှုပျခမျးနှဈခုနဲ့စုပျယူလိုကျနဲ့လုပျနပေါတော့တယျရှငျသူလုပျနတောကောငျးလှနျးလို့ ကမြလေ..တကိုယျလုံးကို တှနျ့လိမျပွီး တအငျးအငျး.. တအားအားနဲ့ အသံတှေ ထိမျးလို့မ၇တော့ဘူး… ထိမျးဘို့လဲ မကွိုးစားခငျြတော့ပါဘူးလေ။
ကိုကွီး ကမြပိပိလေးကိုယှကျပေးနတောအခါနှဈဆယျလောကျဘဲရှိအုံးမယျ.ထငျတယျ.. ကမြလေ.. တကိုယျလုံးထူပူလာပွီး ပိပိလေးဆို အရမျးနဲ့ ကငျြတကျလာပွီးမခံစားနိုငျအောငျဖွဈလာတာနဲ့နောကျဆုံးကိုကွီးရဲ့ ခေါငျးကိုအတငျးလကျနဲ့ ဆှဲကပျပွိး ခါးကော့တငျကာပိပိနဲ့ဖိကပျပွီးအားအားးးးရှီးးကိုကွီးးးးးအားးး ရှီးးးးးးးးးးအားးးးးးးးးးးးဆိုတဲ့ ငွီးသံကွီးနဲ့အတူအရညျတှတေလဟောညှဈထုတျလိုကျမိပါတော့တယျ…အရညျတှထှေကျသှားပွီးတာတောငျ ကိုကွီးက အစကေို့ ဖိပွိးစုပျနလေို့ ဓါတျလိုကျသလို တကိုယျလုံးတုနျကနဲ တုနျကနဲ ၅ ခါလောကျဖွဈပွိးမှ ငွိမျကသြှားပါတော့တယျ။ ပွီးပါပွီ။ ။
ပန်းအိပ်မက် ( စ / ဆုံး )
ကျွန်တော့်နာမည် အာကာပါ… အင်းစိန်မှာ နေတယ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဘွဲ့ရပေမယ့် အလုပ်ကတော့ကားပွဲစားဆိုတော့ဝင်ငွေလဲ အသင့်အတင့်ပေါ့… လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်မှ အိမ်ထောင်ကျတာမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကနေ ရန်ကုန်မှာစါရင်းကိုင်လာလုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော့်မိန်းမကအသက် ၁၀ နှစ်ငယ်တယ်အခုမှအသက်၂၃ နှစ်… မွန်နဲ့ရှမ်းစပ်ထားတာအသား က ဖြူဝင်းပြီးကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲ မြင်သူငေးဘဲ…အပြင်တစ်ယောက်ထဲသွားရင်အပျိုထင်ပြီးလိုက်ငန်းတဲ့သူများလို့သူ့ အလုပ်အသွားအပြန်ကို ဖယ်ရီလုပ်ပေးနေရတယ်အရမ်းလှလွန်းလို့ကျွန်တော့တို့ရည်းစားစဖြစ်ပြီးနယ်ကျွံ့ခါစကအငန်းမရ၅ခါ တောင်ဆွဲလိုက်တာနေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆေးခန်းပါပြလိုက်ရတယ်။
အခုတော့လဲ ၁ နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ သူကတောင် ကျွန်တော့်ကို ဦးဆောင်ချင်နေပြီ… ကျွန်တော့ အသင်အပြ ကောင်းတာလဲ ပါတာပေါ့… နေတိုင်းလုပ်နေတော့ အရင်လို ၃-၄ ချီမလုပ်နိုင်ပေမယ့် တစ်ရက်ကို တစ်ချီကောင်းကောင်းတော့ လုပ် ဖြစ်တယ်… ကျွန်တော့်အတွက် ၁ ချီဆိုပေမယ့် သူ့ကို တော့ အနဲဆုံး ၂ ခါလောက်ပြီးအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်… မိန်းခလေးဆို တာလဲ အထင်သေးခံရမှာ ဆိုးလို့တာ ဟန်ဆောင်နေရတာ… သူလဲ သွေးသားနဲ့ လူဆိုတော့ ကာမဆန္ဒဆိုတော့ရှိတာကိုး။
သူတို့က တစ်ခါတစ်ခါပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့လို အားကုန်သွားတဲ့ သူမျိုးတွေမဟုတ်တော့ ပိုတောင် လိုအပ်ချက်များသေး တယ်… အနဲဆုံး ၂ ခါလောက်မှ မပြိးလိုက်ရရင် သိပ်မကြေနပ်ချင်ဘူးသုံးလေးရက်လောက်သာ. မလိုးဘဲ ထားကြည့်လိုက် မကြေမ နပ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တမျိုး ပြသနာရှာပြီး စိတ်ကောက်နေတော့တာ… အားရပါးရလိုးပေးလိုက်မှဘဲ စိတ်ကောက်ပြေသွားတာ… အရိုးကွဲ မှ အသဲစွဲတယ်ဆိုတာတောင်ရှိတယ်မဟုတ်လား… အရိုးကွဲအောင်လိုးပေးလိုက်ကြည့် နောက် ဆိုကိုဘာလုပ်လုပ်အပြစ်မမြင်တော့ဘူးဒါတော့အိမ်ထောင်သည်ယောက်င်္ကျားတိုင်းသိပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့ လိုရင်းမရောက်ဘဲ နေတော့မယ်အိပ်ထောင်သက် ၁ နှစ်လောက်မှာ မိန်းမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားလို့ တစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တဲ့ နယ်က သူ့ညီမအငယ်ကို စောင့်ရှောက်ထားဘို့ဖြစ်လာတယ်။
ကောင်မလေးနာမည်က သရဖီအခုမှ ကိုးတန်းကျောင်းသူအသက်ကတော့ ၁၅ နှစ်စွန်းစွန်း… လှချက်ကတော့ ကျွန်တော့မိန်းမအရှုံးပေးရတယ်… ဒီအရွယ်ဆိုတာ ဘဝသက်တန်းတလျှောက်အလှဆုံးအရွယ်မို့လဲ ပါတာတော့လေ… ကျွန်တော်ကလဲ မောင်နှမမရှိတဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားဆိုတော့အခုလိုသရဖီ ကျွန်တော့အတွက် ညီမလေးတစ်ယောက်ထပ်ရသလိုပါဘဲ… နယ်ကျောင်းကနေပြောင်းလာတာဆိုတော့စာသိပ်မလိုက်နိုင်လို့ အားတဲ့အချိန်တွေမှာဂိုက်လုပ်ပေးရသေးတယ်ဆိုးတာတစ်ခုက သူရောက်လာလို့ ညဘက်တွေဆို ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက် အရင်လို အားရပါးရ သိပ်ကဲလို့ မရတော့ဘူး… ကျွန်တော်တို့ လင်မယားက လိုးပြီဆိုရင်အားရပါးရ အော်ပြီးလိုးလိုက်ရမှ ကျေနပ်တာ… အခုတော့ အိမ်မှာ သရဖီရောက်လာလို့ သူကြားမှာဆိုးပြီး ထိန်းလုပ်နေရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
ထိန်းပြီး လိုးတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ တစ်ပါတ်လောက်ပါဘဲ…ဝါသနာကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ လိုးရင်းအရမ်းကောင်းလာရင်အရင်လိုအသံတွေ ပြန်ကျယ်လာတော့တာပါဘဲ… ( သရဖီ ) ကျမနာမည်သရဖီပါမိဘတွေမရှိတော့လို့တစ်ဦးတည်းတော့ အမဆီမှီခိုဘို့ရန်ကုန် ရောက်လာတာပေါ့ရန်ကုန်မှာကထုံးစံအတိုင်းနယ်လိုအိမ်ကြီးကြီးနဲ့ နေဘို့မလွယ်တော့အမတို့လဲတိုက်ခန်းမှာဘဲနေကြတယ်ကျမ အတွက်သုံးထပ်သားနဲ့ အခန်းလေး ကန့်ပေးထားလို့ နေရတာအဆင်ပြေပါတယ်… အခန်းကန့်ပေးထားပေမယ့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် အပေါ်ပိုင်းမှာတော့ ကြက်တူရွေးတန်းလေးတွေ ရိုက်ထားပေးတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်ခါစ အဆင်မပြေတာက ကျောင်းစာဘဲ. စာသင်ပုံက နယ်နဲ့ သိပ်မတူတော့ အစပိုင်းတော့ တော်တော် အခက်အခဲဖြစ် တယ်ဒါပေမယ့် မမယောင်္ကျား ပြပေးလို့ နောက်ပိုင်းမှာ တော့်တော်အဆင်ပြေပါတယ်စါပြပေးတဲ့အပြင် ကျမကိုလဲ ညီမလေး တစ်ယောက်လို ချစ်လို့ သူ့ကို ကိုကြီးလို့ဘဲခေါ်တယ်… ကိုယ့်အမရဲ့ ယောင်္ကျားဆိုတော့လဲ အကိုဘဲပေါ့…ဒါပေမယ့် တစ်အိပ်ထဲ နေပြီး အိပ်ခန်းချင်းကပ်ယက်ဆိုတော့ တရေးနိုး ညဘက်မှာ အသံတွေ ကြားနေရတယ်… အသံတွေကလဲ အစပိုင်းမှာ တိုးပေမယ့် နောက်တော့ မထိန်းနိုင်လို့ထင်တယ် တော်တော်ကျယ်တာဘဲ…မမတို့ အခန်းက အသံတွေ ကြားရပြီဆို ကျမ အာခေါင်တွေခြောက် လာပြီး တံတွေးတွေ အခနခန မျိုချနေရတယ်… အဲဒီအသံတွေ ကြားရမှာ ရှက်လို့ နားပိတ်ထားရင်တော့ နားထဲမှာ ပဲ့တင်သံတွေ ထွက်နေသလိုဘဲ။
အ.အ.အအား.အားး…အား…ရှီးးးးကိုရယ်…အားး…အား.အားးကိုကို… အားဆိုတဲ့ မမရဲ့ အံကြိတ်ပြိး အော်တဲ့ အသံတွေတော့ဗွတ် ဖွတ်ဖွတ်ဖွတ်နဲ့မည်နေတဲ့ အသံတွေရော…ကောင်းလိုက်တာအသဲရယ်အသဲကော ကောင်းလားအားကောင်းတယ်ကို.လိုး.လိုး… အားရှီးးးးးအားအကို ပြီးတော့မယ်အား…ကိုကိုကို.. အားးးးးးးးးးးး ပြီပြီကို.. အားးး.အားးးးဆိုတဲ့ အသံတွေရော စုံနေတာဘဲ.. ကျ မအိပ်ပြီထင်ပြီး ထင်တိုင်းကြဲနေကြတာလေ…. အသံတွေ ကြားရပြီဆို ကျမတကိုယ်လုံး ထူပူလာပြီး ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာဘဲ… ကိုကြီးက မမ ပိပိလေးကို လိုးနေတာဘဲ လို့ သိလိုက်ပြီး ကို့ပိပိလေးကိုယ် ပြန်ကိုင်ကြည့်မိတာ ကျမပိပိလေးက အရင်ထက် အရမ်း ကို ဖေါင်းပြီးတင်းနေတာဘဲ…နယ်မှာတုန်းက ဖားပြုတ်တွေကို သွားစရင် စိတ်တိုလာလို့ ဖေါင်းလာသလားထင်ရတယ်… အဝမှလဲ အရည်တွေရွဲနေတာဆိုတာ လေ။
မမတို့အခန်းထဲက အသံတွေနားထောင်ရင်း ကိုယ့်ပိပိလေးကို ပြန်ကိုင်ထားရတာလဲ တကယ့် အရသာပါဘဲရှင်… ပိပိထိပ်က ထောင်တက်နေတဲ့ အစေ့လေးကို ပွတ်မိတဲ့ အခါဆို တစ်ကိုယ်လုံးကိုကျင်တက်သွားတာဘဲအသံနားထောင်ပြီးလိုက်ပွတ်နေတဲ့ကျ မတောင်ဒီလောက်အရသာရှိနေတာတကယ်လုပ်နေတဲ့မမဆိုဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲမသိဘူး၎-၅ရက်လောက်ည တိုင်းအသံတွေကြားရတော့ ချောင်းကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်အသံတွေ နားထောင်ရုံနဲ့ အားမရနိုင်တော့ဘူး…. အဲဒါနဲ့ မမတို့ အခန်းနဲ့ကပ်ရပ် နံရံနားကို အသာတိုး. စာကျက်ရင် ထိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံလေးကို အသံမထွက်အောင် အသာရွေ့ရင်း.. ဖြေးဖြေးချင်းခုံပေါ် တက်ပြီး မမတို့အခန်းကို ကြက်တူရွေးတန်းတွေကြားကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့။
အမလေး.ကိုကြီးလေမမရဲ့ပိပိလေးကိုအားရပါးရယက်နေပါ့လားမမလဲအရမ်းကောင်းပုံရတယ်သူ့ရဲ့ ပိပိရဲရဲလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲပြီးအားရပါးရဇိမ်ယူနေလိုက်တာများ.မနာလိုစရာကောင်းလိုက်တာ…နှစ်ယောက်လုံးအဝတ်အစားဆိုတာလဲ လုံးဝမရှိတော့ ဘူး.. အယှက်ခံရတော့ အရမ်းကောင်းလို့ထင်တယ်… ပါးစပ်ဟ အသက်ရှုရင်း မျက်နှာ တစ်ခုလုံး ရှုံမယ့်ပြီး တအင်းအင်းနဲ့ကို ငြီး လို့… မမရဲ့ နို့လုံးလုံးလေးနှစ်လုံးကလဲ ခန္ဒာကိုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စည်းချက်လိုက်ရင်း တတုန်တုန်နဲ့ လှုပ်ရှားနေလိုက်တာ…ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးနှစ်လုံးကတော့ကိုကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ယှက်လိုက်ရအောင်လိုက်လျောထားတာထင်တယ်. ဘေးနှစ်ဖက်ကိုအစွမ်းကုန် ဖြဲကားပြီးတော့သူ့ပိပိလေးကိုဖြဲထားလိုက်တာများရှင်ကျမလဲကိုကြီးတို့အတွဲကို ကြည့်ရင်းစိတ်ထဲမှာအားမလိုအားမရ ဖြစ်လာလို့ ညဝတ်ဂါဝန်လေး မပြီး ဖောင်းကားနေတဲ့ ကိုယ့်ပိပိလေးကို ပြန်ကိုင်ရင်း အစေ့လေးကိုပွတ်နေမိတယ်… စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုကြီး ယှက်နေတယ်လို့ သဘောထားရင်းပေါ့… ကောင်းလိုက်တာရှင်။
နောက်တော့ ကိုကြီးက မမဘေးမှာ. လှဲအိပ်လိုက်တာ. အမလေး ပထမဆုံးစမြင်ဘူးတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောင်္ကျားတစ် ယောက်ရဲ့ လီးဆိုတာကြီးက အကြီးကြီးပါလား… ခုနှစ်လက်မလောက်ရှိမယ်… ဒုံးပြန်ကြီးအလား. အပေါ်ကိုထောင်ပြီး တရမ်းရမ်း နဲ့… ထိပ်ကြီးက လဒစ်ဆိုတာကြီးတယ်ထင်တယ်. နီညှိရောင်သန်းပြီး အရေတွေလက်လို့လေ…မမကလေ.. ကိုကြီးရဲ့လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ လှန်းဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ… ပြီးမှ အားရပါးရ အပေါ်အောက်ပွတ်ပြေးနေတာ.. ကိုကြီးရဲ့ လဒစ်ကြီးက လက်နှစ်ဖက် ကြားက ပေါ်လာလိုက် ပြန်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ့…ပြီးမှ ခေါင်းငုံသွားပြီး မမရဲ့ နှုပ်ခမ်းသားဖူးဖူးလေးတွေနဲ့ ငုံစုပ်လိုက်တာကိုကြီး လဲအရမ်းကောင်းသွားပုံရတယ်။
အား… ရှီးးးးဆိုပြီး ခါးကော့ပေးလို က်တာချောင်းကြည့်နေတဲ့ကျမလေ… ယောက်ရမ်းပြီး ကို့လက်ညိုးကို စုပ်နေမိတယ်ကိုကြီး ကောင်းလေ မမကပိုအားစိုက်ပြီးစုပ်လေနဲ့ ပါးနှစ်ဖက်ကို ခွက်လို့… မမခေါင်းမော့လိုက်တယ်ဆိုလီးကြီး မမပါးစပ်ထဲက ထွက်လာ တဲ့အခါနှုပ်ခမ်းရဲရဲလေးတွေကလီးကြီးနဲ့ကပ်ပြီးအပြင်ကိုကပ်ပါလာတာကမိန်းခလေးချင်းကြည့်နေတဲ့ကျမတောင်စိတ်လှုပ်ရှား တယ်ကိုကြီးလဲ အရမ်းကောင်းနေပုံရတယ်.တအားအားနဲ့အရသာခံနေရုံတင်မဟုတ်ဘူး. မမရဲ့ ဆံပင်လေးတွေကို သပ်တင်ရင်း သူ့ လီးကြီး မမ ပါးစပ်ထဲ ဝင်ထွက်နေတာကိုပါ အားရပါးရ ကြည့်ရင်း အရသာခံနေတယ်။
ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ကျမလဲ လက်ညှိးတစ်ချောင်းထဲ စုပ်ရတာ အားမ၇တော့လို့ လက်ခလယ်ပါပေါင်းပြီး နှစ်ချောင်းပူးစုပ်နေမိ တယ်. ကိုကြီးလီးအမှတ်နဲ့ပေါ့ …. မမတို့အခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားပြီး ကိုကြီးလီးကြီးကို စုပ်ကြည့်ချင်လိုက်တာဆိုတာလေ….. ပြော သာပြောရသာပါ. တကယ်ဆိုကိုင်တောင်ကိုင်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး..အသဲယားစရာကြီးကို. ကြောတွေကလဲအပြိုင်းပြိုင်းထလို့ မာတောင့်တောင့်ကြီးနေမှာဘဲနော်.မမက စုပ်ရင်းနဲ့ အားမရတော့ဘူးထင်တယ်…လိုးတော့မယ် ကို. ရာဆိုပြီး ကိုကြီးပေါ်ကို တက်ခွ ပြီး ထောင်နေတဲ့ လီးကြီးကိုလက်နောက်ပြန်ကိုင်ရင်းသူ့ပိပိလေးနဲ့ပွတ်ဆွဲနေလေရဲ့…ကျမလဲ မမလုပ်တာကြည့်ရင်း ကိုယ့်ပိပိလေး အဝကို လက်နဲ့ ပွတ်နေမိတယ်။
နောက်တော့ မမက ကိုကြီးလီးကို ပိပိအခေါင်းဝတော့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်တာ….. ကိုကြီးရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးဆိုတာ လေ.. မမရဲ့ ပိပိလေးထဲတဖြည်းဖြည်းအထဲကို ထိုးခွဲဝင်ရောက်သွားလိုက်တာမမရဲ့ပိပိလေးထဲကို ကိုကြီးလီးတစ်ဝက်လောက်ဝင် သွားတဲ့အချိန်ကျမပိပိလေးထဲကိုလဲလက်ကအလိုလိုသွင်းမိရက်သားဖြစ်သွားတာလက်နှစ်ဆစ်လောက်ဝင်သွားတယ်အမလေးး လေးးး ကောင်းလိုက်တာ ရှင်…လက်နဲ့တောင် ဒီလောက်ကောင်းနေရင်.ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့သာဆိုရင်တော့လားမမတို့ကို ကြည့်နေ ရင်းနဲ့ကလိနေတဲ့ကျမလေအရမ်းကောင်းလာပြိး ဒူတွေ မခိုင်ချင်တော့လို့မလဲသွားအောင်သစ်သားတန်းတွေကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ သစ်သားတန်းတွေကို ကိုင်ထားရတယ်…မမက လုပ်နေရင်းနဲ့ အရှိန်ရလာလို့ ထင်တယ် ပေါ်ကနေအားရပါးရကို စေါင့်ချနေလိုက် တာများအရမ်းကောင်းနေပုံရတယ်မျက်နာလေးရှုံမယ့်လို့ အပေါ်မော့ရင်း ပါးစပ်ကနေ အသက်ရှုရင်း အရသာခံနေလိုက်တာများ တော်တော်ကောင်းပုံရတယ်ကိုကြီးကလဲမမစေါင့်ချက်နဲ့အညီ အပေါ်ကို ကော့ကော့တင်ပေးနေတာ.. ဆီစပ်နှစ်ခု ရိုက်မိတဲ့ အသံ တွေက တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့။
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီးကျမလဲ အားကျမခံ ပိပိလေးထဲကို လက်နဲ့ ခပ်သွတ်သွတ်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေမိတယ်… နောက်တော့.အားကိုအားး. အားးးးပြီးပြီးး အားအား.အားးးးးးးး ပြီးပြီဆိုပြီး မမတစ်ယောက် ကိုကြီးပေါ် အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသွား တာ… အောက်က ကိုကြီးလဲ အလိုက်သင့်ဖမ်းယူပြီးထွေပိုက်ထားရင်း မမ နှစ်ဖူးလေးကို အနမ်းရှည်ကြီးပေးနေတယ်ကျမလဲ လေ… မမ ပြီးပြီဆိုပြီ အော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဲ ပိပိလေးက အတင်းကိုပွစိပွစိနဲ့ ဖြစ်လာပြီ အထဲကနေ အရည်တွေ ထွက်လာလိုက် တာကျမလဲမမက ကိုကြီးပေါ်မှောက်ချလိုက်တော့မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လှမ်းမြင်နေရတဲ့ မမပိပိလေးထဲ ကိုကြီးလီးစိုက်ဝင်နေတာ ကို မျက်တောင် မခက်ဘဲ ကြည့်နေမိတယ်… ကိုကြီးလီးက ဘယ်လိုမ မနေသေးဘူးထင်တယ်. မာတောင့်ပြီး… မမထဲက ထွက် ထားတဲ့ အရည်တွေနဲ့ စိုရွဲလို့။
မမကို ထွေးပွေ့ထားရင်း တစ်ချက်ချက် အပေါ်ကို ကော့ကော့ထိုးပြီး ဆက်လုပ်နေသေးတယ်… ကိုကြီးကော့တင်လိုက်တိုင်းလဲမမ ဆီက…အအ…အဆိုတဲ့ ညှီးသံလေးတွေထွက်နေတုန်းဘဲ… ကောင်းနေသေးပုံရတယ်…ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ကျမလဲ လက်ညိုးကို အဆုံးထိထည့်ထားရင်း ကိုကြီးလီးကို မမပိပိလေးထဲ ကော့တင်လိုက်တိုင်း အချိန်ကိုက် ကလိနေမိတယ်…တကယ်အလိုးခံနေတဲ့ မမတော့မသိဘူး. ချောင်းကြည့်ရင်း ကလိနေတဲ့ ကျမတော့ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ပါးစပ်ဟပြီး အသက်ရှုနေရတယ်…. လည်ချောင်းထဲမှာလဲ ဆို့တက်လာလို့ အသံမထွက်အောင် မနဲ သတိထားနေရတယ်…ကျမလဲ ကိုကြီးလီးကို အငန်းမရကြည့်နေ ရင်းနဲ့ သူ့မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့….အမလေး… ကိုကြီးနဲ့ ကျမ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတာ။
ကျွန်တော်လဲ မိန်းမအပေါ်ကတက်ဆောင့်ရင်းသူတစ်ခါပြီးသွားလို့ ပြိုလဲလာတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုပွေ့ဖတ်ရင်း အနမ်းပေးပြီး ခနားနားနေမိ တယ်ခနနားနေတုန်း တနှာစိတ်နဲနဲလျှော့သလိုရှိတုန်း စိတ်ထဲ တစ်ယောက်ယောက်ချောင်းကြည့်နေသလိုခံစားရတာနဲ့ ကြည့်မိ တော့… အဟာ… သရဖီလေး ကျွန်တော်တို့ လင်မယား လိုးတာကို ချောင်းကြည့်နေတာဘဲ… ကျွန်တော်လဲ အရမ်းလှတဲ့ အပျိုမ လေးတစ်ယောက်က င့ါလိုးတာကို ကြ့ည်နေပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မာန်တက်ပြီး မိန်းမ စေါက်ဖုတ်ထဲ စိမ်ထားတဲ့ လီးက ငေါက်ခနဲ ဖြစ်သွားတာတချီပြီးလို့မှိန်းနေတဲ့ မိန်းမတောင် ကောင်းသွားပြီး အခနဲ အော်သွားတယ်ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ သရဖီ မျက်နှာလှလှလေး ကို အရသာခံကြည့်ရင်း မိန်းမစေါက်ဖုတ်ထဲကို တစ်ချက်ချင်း ကော့တင်ပြီး လိုးပေးနေလိုက်တာ…သရဖီလဲ. ကျွန်တော်လီး သူ့ အမ စေါက်ဖုတ်ထဲ ဝင်တာကို စိုက်ကြည့်ရင်း သူ့ အဖုတ်သူ နိုက်နေပုံရတယ်… ပါးစပ်ဟ အသက်ရှုရင်းလို့… အသံမထွက်အောင် မနဲ ထိန်းနေရတဲ့ပုံနဲဗျာ….သရဖီလေး ကျွန်တော်တို့ လိုးတာကြည့်းရင်း အဖုတ်နိုက်နေရာက နှစ်ယောက်သားအကြည့်ချင်းဆုံသွား တယ်။
ကျမလဲ ကိုကြီးနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံတော့ လှန့်ဖြန့်ပြီး နောက်ကို ဆုတ်လိုက်မိတာ.. ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျပါတော့ တယ်… “ဝုန်း” “အမလေး” လို့ လန့်အော်မိတော့…ဖီဖီရေ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ မမရဲ့ စိုးရိမ်တကြီးလှမ်းမေးသံကြားလိုက်ရတာ နဲ့.ဘာမှ မဖြစ်ဘူး မမ. စာအုပ်ပုံပြိုလို့ လန့်သွားတာ.လို့ဖြေလိုက်တော့…အော်.. အေး.အိပ်တော့ ဖီဖီ… ညနက်နေပြီ” ဆိုတာ နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မမလို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…ပြီးတော့ မှ အတင်းကုန်းရုံးထပြိး ခုတင်ပေါ်ကို လှဲအိပ်လိုက်ရတယ်ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျသွား တာဖင်ထိုင်ရက် ပြုတ်ကျလို့ထင်တယ်တင်ပုဆုံနားတောင် နာသွားတယ်.မမတို့တော့ ကျမဆီက ဘာမှမဖြစ်ဘူး အသံကြားလို့ထင် တယ်…ဆက်လိုးနေကြလေရဲ့. ကျမ မအိပ်သေးတာ သိလို့ထင်တယ်. စေါစေါကလောက်တော့ အသံမကျယ်တော့ဘူး…ကျမလဲ ချောင်းကြည့်တာကို ကိုကြီးမိသွားလို့ အရမ်းလန့်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတာကော…မမတို့လိုးနေတဲ့ပုံတွေမျက်လုံထဲ ဖျောက်မရဖြစ်နေ တာကောပေါင်းပြီး ကာမစိတ်ဖုံးလွမ်းပြီး အရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ထွက်နေလိုက်တာ.မိုးလင်းခါနီးမှဘဲ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
ညဖက် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အိပ်မပျှော်ဖြစ်လိုက်လို့ နောက်နေ့မနက်အိပ်ယာထ နောက်ကျသွားတာ.. နိုးလာတော့ မမတောင် ကုမ္ပသီ သွားပြီကိုကြီးလဲ ကားပွဲစားတန်းဘက်ထွက်သွားလို့ အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ်…… ကျမက စနေနေ့ဆိုတာ့ ကျောင်း တက်စရာ မလိုဘူးလေ…နိုးတာနဲ့ အရင်ဆုံး အိမ်သာသွားပြီး ပိပိကို ရေအရင် ဆေးရတယ်… မနေ့ညက အရေတွေပလပွနေရာက ခြောက်နေပြီဆိုပေမယ့် နေရတာ စိတ်မသန့်လို့…ရေဆေးပြီးတာနဲ့ မျက်နှာသစ်… ရေပါ တစ်ခါထဲ ချိုးပြီး အိမ်နေရင်း တစ်ယောက် ထဲ ရှိတာဆိုတော့ ထဘီဝတ်မနေတော့ဘဲ သဘတ်လေးဘဲ ပတ်ပြီ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လိုက်တာ…အို… ကိုကြီး……ကားပွဲစား တန်းမသွားတော့ဘဲ ပြန်လှည့်လာပုံရတဲ့ ကိုကြီးကို တွေလိုက်ရလို့ ကြောက်လန့်ပြီး အခန်းဘက်ကို အပြေးလေးသွားလိုက် တယ်..တစ်ကိုယ်လုံးမှာ သဘက်တစ်ခုဘဲပတ်ထားတာဆိုတော့ ကိုကြီးရှေ့မှာ ရှက်တာလဲပါတာပေါ.. ဟုတ်တယ်လေ. သဘက်ဆို တာ ပိပိတွေ့ နို့တွေကို လုံအောင်ဖုန်းထားပေမယ့် ကျမရဲ့ ပေါင်တံ တစ်ဝက်ကျော်လောက်ထိ ပေါ်နေတာကိုး။
ကျွန်တော်လဲ ဒီနေ့ ကားပွဲစားတန်းဘက် ထွက်လာပြီးခါမှ စိပ်သိပ်မပါတော့တာနဲ့ အိမ်ကို ခြေလှမ်းပြန်လှည့်ရင်း မနိုးသေးတဲ့ သရဖီအတွက် မုန့်ဟင်းခါးပါ ဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်..အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သရဖီရေချိုးနေတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ ပါလာတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို အဆင်သင့်ပြင်ပေးထားလိုက်တယ်…၅ မိနစ်လောက်နေတော့ သရဖီလေး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ပုံက အရင်လို လုံလုံခြုံခြုံ မဟုတ်ဘဲ သဘက်တစ်ထည်ဘဲဖြစ်သလို ပတ်ထားတာ.. အောက်ပိုင်းက သူ့ရဲ့ ပန်းနုရောင်သန်းနေတဲ့ အသားအရည်နဲ့ ဖြောင့်ဆင်း နေတဲ့ ပေါင်လုံးလုံးလေးတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာလိုက်တာ…မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော့ကို ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရလို့ထင်တယ်… လန့်ပြီး အပြေးတပိုင်းထွက်သွားတော့ ကဗျာဆန်ဆန်တုန်ခါသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ အပျိုစင် အိုးလေး နဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို တဝကြိးငေးကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
နိုးလာပြီလား… ဖီဖီ… ဒီမှာ မနက်စာပြင်ထားတယ်.စားလိုက်အုံးလို့လှမ်းပြောတာကို ကိုကြီးကို မျက်နှာချင်း မဆိုင်ရဲ တာ နဲ့.ဟုတ်ကဲ့.တစ်ခွန်းထဲပြောပြီး အခန်းထဲ မြန်မြန်ပြေးလာမိတာအခန်းဝမှာခလုတ်တိုက်လဲတော့တာဘဲဝုန်းအမလေး…အိမ်မှာ တစ် ယောက်ထဲ ရှိတယ်ထင်ပြီး ပြီးစလွယ် ပတ်လာခဲ့တဲ့ သဘက်က လုံအောင်မဖုန်းနိုင်တော့ဘဲ…ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ကိုကြီး ရောက်လာလို့…အိုး…. ကိုကြီး မလာနဲ့လေ… သွားသွား…ဆိုပြီးအလှန့်တကြား ပြောလိုက်မိတယ်..ကိုကြီးလဲ ကျမရှက်မှာဆိုးလို့ လား…မကောင်းတက်လို့လားမသိ… အခန်းအပြင် ပြန်ထွက်ပေးတာနဲ့ သဘက်ကို သေသေချာချာပြန်ပတ်ပြီး ကြိုးစားထကြည့် တာ. ညက ထိထားတာရယ်. အခု လဲတာရယ်ပေါင်းလိုက်လို့ ဘယ်လိုမှ မထနိုင်တော့ပါဘူး…ဖီဖီ… ထလို့ရလား….အီးကျွတ်ကျွတ် ကျမလဲ ပြန်မဖြေနိုင်တော့ဘဲ ငြီးငြူနေမိတယ်။
ကျမဆီက ထူးသံမကြားတာနဲ့ ကိုကြီး အတင်းဝင်လာပြီ…ကဲ.. မထနိုင်ဘူးမဟုတ်လား.လာပါရှက်မနေပါနဲ့ကိုကြီးကတခြားလူမှ မဟုတ်တာဆိုပြီး အတင်းဆွဲထူပြီး ခုတင်ပေါ်တင်ပေးတယ်ကျမတကိုယ်လုံးမှာသဘက်တစ်ခုထဲပတ်ထားတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ကိုကြီး ဆွဲထူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖယိုဖရဲဖြစ်သွားလို့နို့အုံလုံးလုံးလေးနှစ်လုံးပေါ်သွားလို့ မနဲလက်နဲ့ကာလိုက်ရတယ်…လက်နဲ့ကာလိုက်ရတာ ဆိုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေနဲ့တစ်ဝတ်လောက်ဘဲကာလို့ရတာပေါ့အားလုံး.တော့ ဘယ်လုံပါမလဲ…ကျမလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ကိုကြီးကို ကြည့်လို့တော့…. ကိုကြီးဆိုတာလေ… ကျမရဲ့ နို့လေးတွေကိုကြည့်နေလိုက်တာ.ကိုက်စားတော့မယ့်အတိုင်းဘဲ…တံတွေးတွေလဲခန ခနမျိုချလို့…သူကြည့်နေတာကိုကျမသိသွားတော့မှရုပ်တည်နဲ့ ဖီဖီလေး.ဘယ်နေရာနာသွားလဲဆေးလိမ်းပေးမယ်ရပါတယ်ဘာမှမ ဖြစ်ဘူး ခြေသလုံးနေရာပါသမီး ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် လိမ်းလို့ရပါတယ်။
ရတယ် မလုပ်နဲ့ အခုသွေးပူတုန်း ဆေးလိမ်းထားမှ သက်သာမှာ. မဟုတ်ရင် ဒဏ်ဖြစ်သွားမယ်…ဆိုပြီး အခန်းထောင့်မှာ အဆင်သင့် ရှိနေတဲ့ ဒဏ်ကြေဆေးယူလိမ်းပေးတော့တယ်…ကျမမှာ. သဘက်က အစကထဲက ပေါင်လည်လောက်ထိဘဲ လုံတာကို အခုလို ခုတင်ပေါင်မှာ လှဲနေပြီး ဆေးလိမ်းခံနေ၇တော့ ပေါင်ရင်းထိပါ ပေါ်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်…ကိုကြီးကတော့ မသိသလို ဆေးလိမ်း ပေးနေလေရဲ့…ဆေးလိမ်းတာကလဲ နာနေတဲ့ ခြေသလုံနေရာက နဲနဲ ကိုကြီးလက်တွေက ဒူးနေရာလောက်ထိတက်တက်လာ တယ်… ပြီးတော့ ဖွဖွလေးဆုပ်နယ်ပေးနေတာကကျမစိတ်တွေကို မရိုးမရွဖြစ်စေပါတယ်သူဆေးလိမ်းဆုပ်နယ်ပေးနေတဲ့ နေရာ တွေကမဆိုင်တဲ့ နေရာတွေဆိုတာသိပေမယ့်လဲကျမကိုယ်တိုင်က ငြင်းဆန်ဘို့ အားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်…ဆေးလိမ်းပေးနေရင်းနဲ့ ခြေထောက်ကိုနဲနဲဆွဲကားလိုက်တာ…ပတ်ထားတဲ့သဘက်က ကျမအောက်ပိုင်းကိုလုံအောင်မဖုံးနိုင်တော့လို့ကျမပိပိလေး လေတိုး ခံလိုက်ရပြီးအေးကနဲဖြစ်သွားတယ်အမလေးကိုကြီးကကျမပေါင်ကြားကိုကြည့်နေတာဘဲ…ကျမလန့်သွားပြီး ပေါင်ကြားကိုလက်နဲ့ ကာလိုက်တော့မမြင်ရပါဘူးဖီဖီလေးရယ်မရှက်ပါနဲ့တဲ့ ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ ပြောနေလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ။
ကျမလဲ သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီး ကြည့်မိကြည့်ရာ ကိုကြီးပေါင်ကြားကို မျက်လုံးရောက်သွားတော့…အင်ကိုကြီးရဲ့ လီး ကြီးက ပုဆိုးကြား ထောင်နေပါ့လားကျမညက ချောင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့လီးကြီးမမကိုအရမ်းကောင်းအောင်လိုးပေးတဲ့လီးကြီးပါလား ဆိုပြီး တွေးမိပြီးမျက်စိမလွှဲဘဲကြည့်နေမိတယ်ကျမရဲ့ အောက်ပိုင်းကို ကြည့်ပြီး ကိုကြီး စိတ်တွေထနေတာဘဲဆိုတာစဉ်းစားမိ တော့ရှက်စိတ်နဲ့ အတူ ကျေနပ်ကြည်နူးတဲ့ စိတ်ပါတပြိုင်ထဲ ဖြစ်လာမိတယ်ကြည်နူးစိတ်နဲ့ တပြိုင်ထဲလိုဘဲကျမရဲ့ပိပိလေးက ဖေါ င်းပြီးတင်းလာတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ်သိလိုက်တယ်…ကျမကြည့်နေတုန်းက ကိုကြီးလီးကြီးက ငေါက်ခနဲ ငေါက်ခနဲ နှစ်ခါ လှု ပ်သွားတာ … ကြည့်နေတဲ့ ကျမလေ. ရောင်ရမ်းပြီး ပိပိလေးကို စစ်ခနဲ စစ်ခနဲ လိုက်ညှစ်နေမိတယ်။
ကျမလဲ ကိုယ့်အဖြစ်ကို မလုံမလဲဖြစ်ပြီး ကိုကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးလေ.. သူ့လီးကြီးကို မျက်စိမလွဲတမ်းစိုက်နေတဲ့ကျ မကို ကြည့်နေတာပါလား… အား… သွားပါပြီ….ရှက်လိုက်တာလေဘယ်လိုနေလဲဖီဖီလေးဘာကဘယ်လိုနေရမှာလဲ.ဘာတွေမေး မှန်းလဲ မသိဘူး. ကိုကြီးနော်ကိုကြီးက ဖီဖီ့ခြေထောက် ဘယ်လိုနေလဲ မေးတာပါ… ကောင်မလေးနော်အမလေ.ကျမ. ကိုယ့်အတွေး နဲ့ကို နောက်တစ်ကြိမ်အရှက်ရပြန်ပြီ…နောက်တော့ကိုကြီးကကျမရဲ့ ခြေသလုံးအောက်ပိုင်းကိုပွတ်သတ်နိုပ်ပေးနေရာကလက်သွား ဆေးလိုက်အုံးမယ်ဖီဖီ့အသားတွေ ပူကုန်မှာစိုးလို့… ပြီးမှ ဒူးကိုနိုပ်ပေးမယ်အာကိုကြီးကလဲဒူးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး… တော်ပြီမနှိုပ်နဲ့ တော့သိတဲ့ လူကြီးပြောရင် နားထောင်စမ်းပါ. ဖီဖီရယ်. ကိုကြီးကို ဆရာမလုပ်စမ်းပါနဲ့.. အခုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးအခန်းထဲက ထွက် သွားတယ်…ကျမလဲ ပြန်ပြောလို့ မရနိုင်မယ့် အတူတူပိုပြီးလုံခြုံအောင် အနားက ဆင်ဆွယ်ရောင် ကြိုးတစ်ချောင်း အကျီင်္လေးကို အမြန်ကောက်စွတ်လိုက်ပြီး သဘက်ကို အောက်ထိတိုးပြီး ပတ်လိုက်တော့ ပိုပြီးလုံလုံခြုံခြုံရှိသွားတာပေါ့။
ကိုကြီးလဲ ဘယ်လောက်တောင် အပြေးတပိုင်း ပြန်လာလဲ မသိဘူး…. ကျမ အတွင်းခံတွေတောင် မဝတ်ရသေးဘူး. သဘက်ပြင် ပတ်ပြီးရုံဘဲရှိသေးတယ်. အခန်းထဲပြန်ရောက်လာပြီး…ကျမကို ပြန်လှဲအိပ်ခိုင်းပြီး ဒူနှစ်ဖက်ကို နှိုပ်နယ်ပေးနေလေရဲ့….ကျမက.ကို ကြီး. သမီး အင်္ကျှဝတ်လိုက်အုံးမယ်လေ…ဆိုတော့ မဝတ်နဲ့ အခုကော ဘာပေါ်နေလို့လဲ… တခြားလူတွေတော့ ကြည့်ချင် တယ်… ကိုယ်ကျတော့ မပြချင်ဘူး… တရားလား…တဲ့..အာ. ဘာတွေလာပြောနေမှန်းမိသဘူး….ဆိုပြီး ရှက်ကို့ရှက်ကန်းနဲ့ ပြန်ပြော လိုက်တော့ ကိုကြီးလဲ ကျမဒူးတွေကို သဘက်အပေါ်ကနေတောင်မဟုတ်တော့ဘူး… အသားကိုပါ တိုက်ရိုက်ထိပြီး ဆုပ်နယ်နေ လေရဲ့… နယ်နေတာမှ တဖြည်းဖြည်း ဒူးအထက်ပိုင်းနားကိုပါနဲနဲတိုးလာနေတာကျမလဲ ကိုကြီးနဲ့ မမလိုးနေတာကို ညက ချောင်းကြည့်ထားတာကို လူမိခံထားရတဲ့ သူဆိုတော့ သူလုပ်နေသမျှကို ဘာမှ မပြောသာဘူး ဖြစ်နေတယ်… ကိုကြီးရဲ့ အပွတ်အ သပ်တွေကို သာယာမိတာလဲ ပါတာပေ့ါ။
ကိုကြီးပေါင်ကြားလို လှမ်းကြည့်မိတော့လဲ… သူလီးကြီးဆိုတာလေ… ဒုံးပျံကြီးထောင်နေသလားထင်ရတယ်… အကြာကြီးကြည့် မိရင် ကိုကြီးမိမှာဆိုးတာနဲ့ မျက်လုံးမိတ်လိုက်တာ.. မျက်လုံးထဲမှာ ကိုကြီးလီးကြီးဘဲ မြင်နေတော့တယ်….ဒါနဲ့ ကျမလဲ မျက်လုံးထဲ မှာ ကိုကြီးရဲ့ ပုဆိုးအောက်က ထောင်နေတဲ့ လီးကြီးကိုတလှည့်… ညက မမ စုပ်ပေးနေတဲ့ ပုံတွေ… လိုးနေကြတဲ့ပုံတွေ ကို ပြန်မြင် လာရင်း…. ကိုကြီးရဲ့ အပွတ်အသပ်တွေကို သာယာမှန်းမသိသာယာနေမိတော့တယ်……ကိုကြီးလဲ ကျမကို ပွတ်သပ်နေတာ. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါင်လည်လောက်ထိတောင်ရောက်လာပြီ….တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အခြေအနေမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ကျမရိတ် မိပေမယ့်လဲ ပါးစပ်က အာစေးထည့်ထားသလို ဘာသံမှ မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
နောက်တော့ ကိုကြီးက ကျမလက်တစ်ဖက်ကို ယူပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး ကျမပေါင်တွေကိုဆက်နယ်နေပြန်တာ ပေါင်ရင်း နားထိတောင်နယ်ချဲ့လာတာကိုကျမလဲကိုကြီးလုပ်နေသမျှကိုငြိမ်ခံမိရင်းသာယာနေမိတယ်ကိုကြီးကကျမပေါင်ကို ပွတ်သပ်နယ်နေ ရင်းက တဖြည်းဖြည်းနေရာရွေ့ယူလာလိုက်တာ…ကျမလက်ကလေးကို သူ့လီးကြီးနဲ့ မထိတထိဖြစ်လာပါတော့တယ်…ကျမလေ.. ကိုကြီးလီးကို လက်နဲ့ ထိမိလိုက်တော့ရုတ်တရက်ဒါကြီးက မမစုပ်ပေးထားတဲ့…မမကို အရမ်းကောင်းအောင် လိုးပေးတဲ့ လီးကြီး ပါလား…ငါလဲ စုပ်ပေးချင်လိုက်တာလို့ တွေးမိပြီး) လက်နဲ့ ဖမ်းကိုင်လိုက်မိတယ်…ပူနွေးပြီး မာတောင်နေတဲ့ ကိုကြီးလီးကိုကိုင်မိပြီး တော့မှ…အိုကျရှက်ပြီးလက်ကို အမြန်ရုတ်လိုက်ရတယ်…
ကိုကြီးလဲ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားသွားလို့ထင်တယ်… ကျမနုပ်ခမ်းကို ကုန်းပြီးစုပ်ယူလိုက်တာ…အသက်ရှုရပ်မတက်ပါဘဲရှင်ခံစား လိုက်ရတဲ့ကျမမှာကျမရုံးပြီး သူ့ကို တွန်းထုတ်ပေမယ့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ရွေ့အောင် မတွန်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…. ကျမနုပ်ခမ်းတ စုံလုံးလဲ ကိုကြီးပါးစပ်ထဲမှာ စုပ်ယူခံထားရတော့ စကားလဲပြောလို့မရဘဲ… တအွန်းအွန်းနဲ့ ဖြစ်နေတာပေါ့။ နမ်းနေရင်းကနေ ကျမ ရဲ့ ဘရာမပါလို့ အလွယ်တကူရှာတွေ့သွားတဲ့ ဆင်ဆွယ်ရောင် ကြိုးတစ်ချောင်း အင်္ကျီ အောက်က နို့လုံးလုံးလေးကိုပါဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်နေလိုက်တာ… ကျမတကိုယ်လုံး အားအင်တွေကုန်ဆုံးသွားသလို ဖြစ်ပြီး ရုံးဘို့ အားမရှိတော့ဘဲ ငြိမ်ကျသွားပါတော့ တယ်… မကြုံဘူးတဲ့ခံစားမှုတွေကို သာယာမိသွာတာလဲ ပါတာပေါ့…နောက်တော့ ကိုကြီးလျှာကြီးကျမပါးစပ်ထဲကို တိုးဝင်လာလို့ တားဘို့ အားမရှိတဲ့ အဆုံးပြန်စုပ်ယူရင်းလည်ချောင်းထဲကနေ တအင်းအင်းနဲ့ ငြီးသံတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်…ကျမရဲ့ နို့လုံးလုံး လေးတွေဆိုတာလဲ ကိုကြီးရဲ့ ပွတ်သပ်မှုကြောင့် အရမ်းကို တင်းလာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေထောင်နေတာ…. ကိုကြီးရဲ့ လက်ဖဝါး နဲ့ပွတ်သပ်နေလို့နဲနဲတောင် ကြိမ်းနေသလိုနဲ့အရမ်းခံလိုကောင်းတာဘဲ…ကျမလဲ ကိုကြီးလျှာကြီးကို တမျှင်းမျှင်းစုပ်ယူနေရာက မောလာလို့ ခနလွတ်ပေးလိုက်တော့ သူ့နှုပ်ခမ်းတွေကကျမပါးလေးကို ရွျေ့သွားပြီးအနမ်းရှည်ကြီးပေးပါတော့တယ်ပြီးမှ ကျမရဲ နားရွက်လေးဆီ ဖွဖွလေး ရွေ့သွားပြီး. လျှာကလေးနဲ့ ကလိနေတာ ကျမ ဓါတ်လိုက်တလို တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်.. ဒါပေမယ့် မရုံး မိပါဘူး… ကိုကြီးလေ… ကျမနှလုံးသားတွေကို အရေပျော်အောင်လုပ်နေသလိုဘဲ။
ပြီးတော့ ကျမရဲ့ အင်္ကျီပါးလေးကို အပေါ်လှန်ချွတ်လိုက်တာ…ကို ချွတ်လို့လွယ်အောင် အလိုလို ကြွပေးလိုက်မိတယ်… ကျမ လေကိုကြီးလုပ်သမျှကို သာယာပြီး လိုက်လျှောနေမိတော့တယ်ရှင်..နောက်တော့ သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကျမရဲ့ နို့အုံတစ်လုံးလုံးကို ငုံပြီးစို နေလိုက်တာ.ခံလိုက်ကောင်းလောက်တာရှင်တစ်လုံးကိုစို့နေရင်း နောက်တစ်လုံကိုပွတ်သပ်စုပ်နယ်ပေးနေတာ…နောက်တော့နို့ လေးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစို့နေရာက အောက်ကို တဖြေးဖြေးဆင်းရင်း ကျမရဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေ…. နောက် ချက်ကလေး ထိ လျှာနဲ့ ယှက်လိုက် နှုပ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ စုပ်ယူလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတာ.. ခံစားရတဲ့ကျမထွန့်ထွန့်လူးနေတော့တာပါဘဲ…ပြီးတော့… တ စိတ်တပိုင်းပြေလျှော့နေတဲ့ ကျမခါးကသဘက်ကိုလှန်ထုတ်လိုက်ပြီး ကျမရဲ့ဆီးခုံကိုနမ်းလိုက်ဆယ်ပင်လောက် ကြို့တို့ကြဲတဲ ပေါက်နေတဲ့ အမွေးနုလေးတွေကို သွားတွေနဲ့ကိုက်လိုက် လျှာနဲ့ ယှက်လိုက်နဲ့ ကျမကို အရမ်းအသဲယားအောင်လုပ်နေပါတော့ တယ်ရှင်…။
နောက်တော့ ပေါင်လေးတွေကို ဖြဲပြီး လျှာနဲ့လိုက်ယှက်လိုက်နမ်းလိုက်နဲ့လုပ်နေတယ်…. ပေါင်တွေကို နမ်းနေရာက ကျမရဲ့ ပိပိအ ပြင်နှုပ်ခမ်းနားထိရောက်လာလိုက် ပြန်ဝေးသွားလိုက်နဲ့လေခံစားရတာပိပိလေးထဲမှာအရမ်းရွလာလို့တခါတည်း ကျမစေါက်ပတ် လေးကိုလျှက်ပါတော့လို့ အော်လိုက်ချင်တော့တယ်…ကိုကြီးလေ… ပိပိလေးကိုလက်နဲဖြဲပြီးအထဲက အတွင်းသားရဲရဲလေးတွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသေးတယ်ကျွန်တော်လဲ သရဖီလေးကို အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး စိတ်ထလာအောင်စေါက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကို တမ်းမယှက်လိုက်ဘဲနဲ့ ဘေးဘက်တွေပေါင်တွင်းသားတွေကိုဘဲယှက်ပေးလိုက်စုပ်လိုက်လုပ်နေမိတယ်…ပြီးမသရဖီရဲ့အပျိုစင် စေါက်ဖုတ်လေးကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဖြဲကြည့်လုက်တာလှလိုက်တာဗျာ… အစေ့လေးက ပြူးပြူးလေးနဲ့ စေါက်ဖုတ်အတွင်းသား လေးတွေကအနီရောက်မကျပန်းဆီရောင်သန်းပြီးအဖုတ်ပတ်ပတ်လည်မှာလဲအမွေးလုံးဝမပေါက်သေးဘဲ ဆီခုံအောက်နားမှာဘဲ ကြို့တို့ကြဲ့တဲ့ အမွေးနုလေးတွေနဲ့အထဲကထွက်နေတဲ့ အရည်တွေကြောင့်ထင်တယ်.. သရဖီ့စေါက်ဖုတ်အနံ့လေးက သင်းလို့ကျွန် တော့်မိန်းမတောင် သရဖီစေါက်ဖုတ်နံ့လောက် ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူး… စေါက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဆိုတာကလဲ ပွင့်ဖတ်လေးတွေကို နုဖတ်ပြီး နှင်းဆီပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကို ကြည့်နေရသလိုဘဲ။
ကျမရဲ့ အရမ်း စိတ်ပါပြီး အရေတွေတစိမ့်စိမ့်ထွက်နေတဲ့ ပိပိလေးကို ဖြဲပြီး အကြည့်ခံရတာ… အရမ်းကို သာယာမိသလိုဘဲလေ… မိန်းခလေးဆိုတော့ ကို့ကို အရမ်းတက်မတ်တယ်ဆို ကြေနပ်ကျတာ မဟုတ်လား…ကိုကြီးလေ. ကျမပေါင်တွင်းသားတွေ… ဆီးစပ်တွေကို စိပ်ကြိုက်ယှက်ပြီး ကျမ မခံမရပ်နိုင် အရမ်းတွန့်လိမ်လာ တော့မှ ရုတ်တရက်… ပိပိအကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အောက်ကနေ အပေါ်ထိ လျှာပြားကြီးနဲ့ဖိပြီးယှက်တင်လိုက်တာအားး.ရှီးးးကိုကြီး…… လို့ အော်ရင်းရုတ်တရက် ခေါင်းထောင်ကြည့်မိပြီးနောက်ဆက်တွဲဟင်းးးးးးးးးးးးး ရှီးးးးလို့ ငြီးသံရှည်ကြီးပေးပြီး ခေါင်းအုံးပေါ် ပြန်ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်ကောင်းလိုက်တာရှင်ဘယ်လိုကောင်းလို့ ကောင်းမှန်းမသိဘူးပထမဆုံးအတွေ့အကြုံလေ.နောက်တော့ပိပိလေးကို ဖြဲပြီးအတွင်းသားတွေကိုလျှက်လိုက်အစေ့လေးကိုလျှာနဲ့ကလော်တင်လိုက်နှုပ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့စုပ်ယူလိုက်နဲ့လုပ်နေပါတော့တယ်ရှင်သူလုပ်နေတာကောင်းလွန်းလို့ ကျမလေ..တကိုယ်လုံးကို တွန့်လိမ်ပြီး တအင်းအင်း.. တအားအားနဲ့ အသံတွေ ထိမ်းလို့မ၇တော့ဘူး… ထိမ်းဘို့လဲ မကြိုးစားချင်တော့ပါဘူးလေ။
ကိုကြီး ကျမပိပိလေးကိုယှက်ပေးနေတာအခါနှစ်ဆယ်လောက်ဘဲရှိအုံးမယ်.ထင်တယ်.. ကျမလေ.. တကိုယ်လုံးထူပူလာပြီး ပိပိလေးဆို အရမ်းနဲ့ ကျင်တက်လာပြီးမခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာနဲ့နောက်ဆုံးကိုကြီးရဲ့ ခေါင်းကိုအတင်းလက်နဲ့ ဆွဲကပ်ပြိး ခါးကော့တင်ကာပိပိနဲ့ဖိကပ်ပြီးအားအားးးးရှီးးကိုကြီးးးးးအားးး ရှီးးးးးးးးးးအားးးးးးးးးးးးဆိုတဲ့ ငြီးသံကြီးနဲ့အတူအရည်တွေတလဟောညှစ်ထုတ်လိုက်မိပါတော့တယ်…အရည်တွေထွက်သွားပြီးတာတောင် ကိုကြီးက အစေ့ကို ဖိပြိးစုပ်နေလို့ ဓါတ်လိုက်သလို တကိုယ်လုံးတုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ၅ ခါလောက်ဖြစ်ပြိးမှ ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ပြီးပါပြီ။ ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပနျးအိပျမကျ